အထီးနှင့်အမြိုးသမီးမြားအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း: နောက်ခံ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုမျိုးစိတ်ပေါင်းစုံနားလည်မှု (2011) - Your Brain On Porn
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲ: နောက်ခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို (2011) ၏ Cross-မျိုးစိတ်နားလည်မှု
neuroscience Biobehav ဗျာ 2011 သြဂုတ်လ; 35 (8): 1687-1703 ။
2011 မေလ 12 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2011.04.013
ဟဲလ် C. Brenhouse နှင့် Susan အယ်လ် Andersen က*
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အချို့စင်ပြိုင်ကြောင့်ဦးနှောက်စနစ်များအတွင်းကျယ်ပြန့်သောအပြောင်းအလဲလွှမ်းခြုံကြောင့်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးအကြားတစ်ဦးသငြ်ကူးေူပာင်းမြကာလဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အားလုံးမဟုတ်, အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကို။ စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဓာတ်လှေကားထိပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်အတူစတင်ခြင်းနှင့်လွှတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦး inverted ဦးပုံသဏ္ဍာန်လိုက်နာပါ။ သို့သော်သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးထက်ပို linear သင်တန်းအောက်ပါအတိုင်း။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို key ကိုအဆောက်အဦများအတွင်းအပြောင်းအလဲများအပေါ်အာရုံစိုက်မည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဲဒီ receptor နှင့်အချက်ပြအချက်များ၏မော်လီကျူးလေ့လာမှုများမှလူသားတွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) မှ spanning သက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူ, ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ အာရုံခံအလွှာထဲမှာဆယ်ကျော်သက်အပြောင်းအလဲများကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွန်းဘယ်လိုပုံမှန်နှင့် atypical အပြုအမူတွေကိုနားလည်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို defining များအတွက်အာရုံကြောမူဘောင်များကိုလက်တွေ့နှင့် preclinical လေ့လာမှုများအပေါ်သို့ဆွဲပါ။
keywords: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, မီးခိုးရောင်ကိစ္စ, တံစဉ်များကို, လိင်ကွဲပြားမှု, အဖြူရောင်ကိစ္စ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အထူးကာလဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကို (အမူအကျင့်အဆင့်မှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏နံပါတ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ထားပြီးMcCutcheon နှင့် Marinelli, 2009; လှံ, 2000; Steinberg, 2010; Laviola et al ။ , 1999; Laviola et al ။ , 2003) နှင့်စနစ်များအဆင့် (Ernst နှင့် Fudge, 2009), သာအာရုံခံပြောင်းလဲမှုများအဆင့် (တစ်ကန့်သတ်ဒီဂရီမှဆွေးနွေးတင်ပြAndersen က, 2003; McCutcheon နှင့် Marinelli, 2009; O'Donnell, 2010; လှံ, 2000) ။ ကျနော်တို့ neuroanatomy, functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု, မျိုးရိုးဗီဇနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများအချက်ပြပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးအာရုံကြောစနစ်များကိုချဉ်းကပ်အတွင်းမူဘောင်သည်ဤအမှတ်အသားများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အပြောင်းအလဲများကိုအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးပုံကို synthesize ပါလိမ့်မယ်။
1 ။ ယေဘုယျအမြင်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မျောက်ဝံများ (နှစ်ခုလေးနှစ်အကြားလူသားများ (WHO က, 10s) တွင်အသက် 19-2010 နှစ်ပေါင်းအကြားကာလအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်Schwandt et al ။ , 2007), နှင့်ကြွက်များတွင်အသက် 35-60 ရက်ပေါင်းအကြား (Andersen က et al ။ , 2000; McCutcheon နှင့် Marinelli, 2009). လှံကို (2000) တစ်ဦးအမူအကျင့််ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ပုံမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အတူဤကာလသူမ၏ဆွေးနွေးမှုစတင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအပြုအမူအသွင်ကူးပြောင်းမှုတသမတ်တည်း (ရွယ်တူများနှင့်လူမှုရေးတွေကိုတစ်ခုတိုးလာ sensitivity ကိုအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီး Blakemore, ဒီဂျာနယ်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်; Forbes မဂ္ဂဇင်းနှင့် Dahl, 2005; Steinberg, 2010; Panksepp, 1981), အန္တရာယ်ယူပြီး (Laviola et al ။ , 2003), နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း (ကာဇီ et al ။ , 2008) ။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့မှသက်ဆိုင်ရာများမှာအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော် gonadal အပြောင်းအလဲများအပေါ်အခြေခံပြီးရနိုင် (Sisk နှင့် Foster, 2004) ။ ဤနေရာတွင်ထွက်ချထားအဆိုပါအငြင်းပွားမှုများမျှအားဖြင့်ပြည့်စုံစေ့စပ်ကိုဆိုလိုသည်နှင့်မဟုတ်ဘဲရည်ညွှန်းတဲ့အချက်အဖြစ်ပြတ်ပြတ်သားသားမသုံးသင့်ပေဖြစ်ကြသည်။
အသစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်, ထွန်းသစ်စလူကြီး, (လူသားများတွင်အသက် 18-29 နှစ်အကြားဖြစ်ပေါ်Arnett, 2000) ။ ယဉ်ကျေးမှုအရအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရလူတို့တွင်ပေါ်ထွက်လာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသောလူကြီးများသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် neurobiological အပြောင်းအလဲအများစုပြီးဆုံးသွားသော်လည်းသက်ရှိသည်ရင့်ကျက်မှုမရှိသေးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်မှာအလုပ်သို့မဟုတ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနောက်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ G. Stanley Hall (1904) သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုလူမှုစီးပွားရေးရှုထောင့်မှကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်အားဖြင့်ကွဲပြားသောအဆင့်ကိုပိုမိုအသိအမှတ်ပြုလာသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုထူးခြားသည့်ထူးခြား။ အရေးကြီးသော neurobiological အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဤ neurobiological ညွှန်းကိန်းများအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်သော်လည်း၊ ကြွက်မျိုးစိတ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသောလူကြီးများကိုဖမ်းဆီးနိုင်သည့် (မရှိသည့်လူ့မျောက်ဝံများတွင်သတင်းအချက်အလက်နည်းပါးသည်) ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကြွက်များသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများကိုရက်ပေါင်း ၄၀ မှ ၆၀ အတွင်းပြသခဲ့သည်၊ သို့သော်ရက်ပေါင်း ၆၀ မှ ၁၀၀ အတွင်းကာလသည်တဖြည်းဖြည်းတည်ငြိမ်သောနှေးကွေးသောတည်ငြိမ်သောပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်ယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲအသစ်တစ်ခုကိုရှင်းပြရန်မီဒီယာဖြစ်ရပ်ထက်စာလျှင်သုတေသနအာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံထိုက်သော“ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူ” ကာလအသစ်ဖြစ်နိုင်မည်လော။ အဆင့်များအားသတ်မှတ်ခြင်း၏အရေးပါမှုသည်မျိုးစိတ်များနှင့်လိင်နှိုင်းယှဉ်မှုများလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဖော်ပြထားသည့်သက်ရှိများ၏ရင့်ကျက်မှုအခြေအနေကိုသဘောတူရန်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေအမူအကျင့်ကိုအောင်မြင်စွာအိမ်ထောင်ဖက်နှင့် reproducing ရှာဖွေတာအပါအဝင်လူကြီးအဖြစ်လူမှုရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျအောင်မြင်ဖို့တစ်ဦးချင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်သဘာဝကရွေးချယ်ရေးအားဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း culminates ။ အပြုအမူ, တိုးမြှင့်သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အသစ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချစိန်ခေါ်မှုများ (နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အတူအပျိုဖော်ဝင်စကတဆင့်ရေကြောင်းသွားလာမှုနှင့်မိဘ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့နည်းသွား coupled သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးထောင်လွှား်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာကာလလူသားကြွက်ကနေအားလုံးအတွေ့အကြုံကို spanning နို့တိုက်သတ္တဝါများ လှံ, 2000) ။ Neuroplasticity သင့်လျော်သောထွန်းသစ်စပတ်ဝန်းကျင်မှာတုံ့ပြန်နှင့်ဤဆုလာဘ်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ-ဆက်စပ်စနစ်များ (များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထင်ရှားသောအမှုဖြစ်၏ခွင့်ပြုသွပ်ရည်စိမ်, 2010) ။ သို့သော်အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဆုံးဖြတ်ချက်ချလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တည်ငြိမ်တိုးပြGeier နှင့် Luna, 2009; Somerville နှင့်ကက်ဆေး, 2010) ။ အတူတူ, ဒီ yin နှင့် yang မြီးကောင်ပေါက်များ၏အများစုကဤလုပ်ငန်းစဉ်များဟန်ချက်အောင်မြင်ရန်အဖြစ်ရွယ်တူများနှင့်မိဘများအနေဖြင့် individuate နှင့်အဖြစ်လွတ်လပ်သော, Self-ထိန်းညှိလူကြီးများပေါ်ထွက်လာဖို့အကူးအပြောင်းနှင့်အတူရုန်းကန်ဘယ်မှာပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှု, အခြေခံ။ ဤအကူးအပြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးအခါ, တစ်ဦးချင်းစီအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မူထူးခြားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးတပ်ဖွဲ့များမှလုပ်နေကြသည်။ သို့သော်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အမှားအယွင်းများ maladaptive အပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်။ psychopathology ပေါ်ပေါက်ရေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း reward- နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အတူအသက်တာရှည်ကိစ္စများအတွက်ရရှိလာတဲ့, ရငျ့၏ပုံမှန်လမ်းကြောင်းကနေ deviance မှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ ဘေးဖယ်ဗီဇ-မောင်းနှင်မူမမှန်ကနေအာရုံခံသို့မဟုတ် receptors ၏ overproduction နှင့်တံစဉ်များကို, ဖိုင်ဘာစီးကူးသို့မဟုတ်အစောပိုင်းဘဝကဲ့ရဲ့၏ unmasking ၏ဆင်းရဲသားကိုသနျ့အတွက်အမှားအယွင်းများအားလုံးဖွယ်ရှိမျှဝေသူဖြစ်ကြ၏။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဥပမာ (ပုံမှန်ထက် atypical တခုတခုအပေါ်မှာခြုံငုံအလေးပေးနှင့်တကွ, နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်တွင်ဤဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အာရုံစိုက်မည်, Andersen ကနှင့် Teicher, 2008; 2009; Marco et al ။ , 2011).
အဆိုပါပြောင်းလဲမှု 1.3 သဘာဝတရား
တစ်ဦးကအာရုံကြောစနစ်များကိုချဉ်းကပ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖှံ့ဖွိုးတိုး၏သဘောသဘာဝ၏ရှုပ်ထွေးဖို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။ pause (နေဖြင့်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းpause et al ။ , 2008), ဦးနှောက် function ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များ၏ဘယ်နေရာတွေမှာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်၏မျက်နှာစာသဘောသဘာဝအထောက်အကူပြုဘယ်လိုဒေသတွင်းနှင့် functional ဖြစ်စေမတူကွဲပြားမှုသရုပျဖျော။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်တလွှားနှင့်၎င်းတို့စပ်ကြားဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်စဉ်များအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုဆန်းစစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံမူဘောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Ernst နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဖော်ပြထားတဲ့ triadic မော်ဒယ်, (အပေါ်အခြေခံသည်Ernst နှင့် Fudge, 2009; Ernst နှင့် Korelitz, 2009) ။ အဆိုပါ triadic မော်ဒယ်အမြစ်များအမူအကျင့်သုံးမူလတန်းစနစ်များ, ဒါမှမဟုတ် node များ, အမည်ရဘေးဒဏ်သင့်မှုစနစ်အတွက်အပြောင်းအလဲအကျိုးကိုစနစ်, နှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး / တုံ့ပြန်မှုတားစီး။ ဤသုံးပါးကွဲပြားခြားနားသော node များဆယ်ကျော်သက်ကလေးရငျ့ typify ကြောင့်အပြုအမူတွေကိုထုတ်လုပ်ရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို node ကို flux တစ်ပြည်နယ်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး system ကိုဖန်တီးပေးရာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဒုံးကျည်သွားလမ်းရှိပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲအပြုအမူရလဒ်များပေးထားသောဇာတ်စင်၏ကြီးစိုး node ကိုအပေါ်မူတည်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖျော်ဖြေဖို့ပျက်ကွက်တဲ့အားပျော့ node ကိုကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖွယ်ရှိဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောပုံစံအတွက် triadic မော်ဒယ်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအရေအတွက်, ဆုလာဘ် sensitivity ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့် cortical ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးအတွက်တခုတ်တရအကူးအပြောင်းမှဆယ်ကျော်သက်ပုံကြီးချဲ့ reactivity ကိုရှင်းပြဖို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ cortical နှင့် limbic ဦးနှောက်ဒေသများအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူမျိုးစိတ်နှင့်လိင်ဖြတ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသေးစိတ်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြရန်ဒီမူဘောင်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
2 ။ တစ်ဦးဒုံးကျည်သွားလမ်း၏ချမှတ်ခြင်း: Neuroanatomical အပြောင်းအလဲများ
အဆိုပါအာရုံခံအဆင့်တွင်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လုပ်ငန်းစဉ် Synaptic သနျ့စတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရုံခံအစပိုင်းတွင် (ထို cortex အတွက် innervation တစ်ခုအတွင်း၌ထွက်ပုံစံအတွက်ချနေကြတယ်Rakic ​​et al ။ , 1986) ။ အဆိုပါ cortex ၏ပိုအပေါ်ယံအလွှာ innervation အကြာတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင်ပထမဦးဆုံး, အ cortex ၏နက်ရှိုင်းအလွှာ innervate မွေးဖွားခဲ့ကြောင်းအာရုံခံ။ အာရုံခံပစ်မှတ် (နှစ်ဦးစလုံး glia ဆဲလ်များကလမျးညှနျRakic ​​et al ။ , 1986; Vernadakis, 1975) နှင့် neurotransmitter စကားရပ်ကဆုံးဖြတ်ကြသည်ဓာတု gradients (လန်ဒီ့ကိုနှင့် Keefe, 1983; Purves နှင့် Lichtman, 1980) ။ Neurotransmitter စကားရပ်, အမြဲတမ်းပေးထားသောဒေသသို့ innervation အတွက်ရရှိလာတဲ့, ဒါမှမဟုတ် ectopic ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နှင့်က transmitter ယာယီလမ်းညွှန်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အာရုံခံသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ဒေသများတွင်ရောက်လာအဖြစ် synapses ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဆိုပါကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အစောပိုင်း postnatal အစိတ်အပိုင်းများရှုပ်ထွေး (တခြားနေရာထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအတိမ်အနက်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါတယ်Levitt, 2003; Tau နှင့် Peterson, 2010), နှင့်ကိုဤနေရာတွင်ထိုကဲ့သို့သောအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်မဟုတ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်, synapses overproduced နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, တံစဉ်များကိုအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ တံစဉ်များကိုတံစဉ်များကို dendritic အကိုင်းနှင့်အ Synaptic ဆက်သွယ်မှုများနှင့် apoptosis ၏သနျ့ဆဲလ်အသေခံပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက apoptosis နှင့်ဆဲလ်အရှုံးကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ synapses ၏တံစဉ်များကို (မျိုးစိတ်ဖြတ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အတွက်အတော်လေးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပြီး Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက် quantified နိုင်ပါသည်Andersen ကနှင့် Teicher, 2004; Huttenlocher, 1979; Lewis က, 1997) သို့မဟုတ်လူသားမြားသညျဘဝသူတို့ရဲ့တတိယဆယ်စုနှစ်သို့ချဉ်းကပ်အဖြစ်မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူအမှု၌ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်နှေးကွေးသောဖြတ်ပြီးသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာ MRI ကနေကိုရည်ညွှန်း (Giedd et al ။ , 1999a; Huttenlocher, 1979; Sowell et al ။ , 2004) ။ Synaptic တံစဉ်များကိုတစ်ဦးလျှင် se အကြီးအကျယ်အသံအတိုးအကျယ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုထိခိုက်ဖို့မယုံကြည်နေစဉ် (Rakic ​​et al ။ , 1986; ဆွေးနွေး Giedd et al ။ , 2008), မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူကိစ္စ volumes ကိုပြောင်းလဲဖွယ်ရှိဖှံ့ဖွိုးတိုးကျော် Synaptic အစိတ်အပိုင်းများ၏ပြုပြင်မွမ်းမံရောင်ပြန်ဟပ်။
2.1 ။ Overproduction နှင့်တံစဉ်များကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
2.1.1 ။ Synaptogenesis နှင့်တံစဉ်များကို
synaptogenesis နှင့်တံစဉ်များကိုများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုမြင့်မားစွာနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားသည်။ Huttenlocher နေဖြင့်အစောပိုင်း Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလူ့လေ့လာမှုများ (Huttenlocher, 1979; Huttenlocher နှင့်က de Courten, 1987) နှင့်စေလွှတ် (ဂိ et al ။ , 1987) သည်ဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းမီးခိုးရောင်ဖြူကိစ္စအတွင်းသိသိသာသာအပြောင်းအလဲကိုသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ အထူးသ, လူ့တိုကျရိုကျ cortex ၏အလွှာ3အတွင်း pruning အတော်လေးသိသာသည်နှင့် synapses ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40% အသက်7နှင့် 15 နှစ်အကြားဆုံးရှုံးသွားသောနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လူသားများအတွက် synaptophysin ၏ Synaptic အမှတ်အသားမွေးဖွားနှင့်အသက်5တစ်နှစ်အကြားတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်အသက် 10 နှစ်ပေါင်းမှာကုန်းရောက်ရှိလျက်, dorsolateral prefrontal cortex (PFC) တွင်အသက် 16 နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်မှကျရောက် (Glantz et al ။ , 2007) ။ မျောက်တွေကိုမော်တာ cortex အတွက် synaptogenesis ၏အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင်း Synaptic ထုတ်လုပ်မှုအလားတူပုံစံ postnatally ဆက်လက်နှင့်လူကြီးများအတွက်နှစ်ယောက်ထက်အဆပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြောင်း synapses အဆင့်ဆင့်ရရှိဖော်ပြသည်။ synaptogenesis နှုန်းမျောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့ကကျြ (အသက်၏3နှစ်) ကိုရောက်ရှိအဖြစ်နှေးကွေး, ပြီးတော့လျှင်မြန်စွာပါ (အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ကိုပယ်ချZecevic et al ။ , 1989) ။ (နှိုင်းယှဉ်, ကြွက် Synaptic သိပ်သည်းဆတန်ဖိုးများကိုအသက် 25 နှင့် 40 ရက်ပေါင်းအကြားမြင့်တက်လာခြင်း, ထို့နောက်အတော်လေးတည်ငြိမ်ရှိနေဆဲAndersen ကနှင့် Teicher, 2004) ။ သို့သော် volume ထဲမှာအားလုံး age- အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကို Synaptic တံစဉ်များကို (ဥပမာ dendritic ရုပ်သိမ်းမှု) ကြောင့်မဟုတ်။ ကြွက်များပိုမိုတိကျသောဆဲလ်ရေတွက်နည်းလမ်းများ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်ကြွက်များတွင် (IV မှလွဲ. ) အားလုံးအလွှာအတွက်မူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex အတွက်အာရုံခံတစ်ခုအသက်အရွယ်-related အရှုံးထုတ်ဖေါ်Yates နှင့် Juraska, 2008) ။ ဆဲလ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားမှု, Synaptic သိပ်သည်းဆကဲ့သို့လည်းကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ ယင်းအမြင်အာရုံ cortex ဆဲလ်တစ်ခု 18-20% အရှုံးပြနေစဉ်, သေးငယ်တဲ့ 5% ဆဲလ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ventromedial အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာပေမယ့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် dorsal သည်မဟုတ်, PFC ကြွက်များတွင် (Markham et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါ overproduction နှင့်တံစဉ်များကို (ကွဲပြားခြားနားသောအလွှာများအကြား) ဒေသများအကြားနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအတွင်းကွဲပြားနေစဉ်တွင်, လုပ်ငန်းစဉ်ပုံမှန်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်အနှံ့ကြည့်ရှုလေ့လာသည်။
ယင်းမော်တာ cortex မှာပြထားပြီးအဖြစ်တံစဉ်များကို (dendritic ကျောရိုးအပေါ်တည်ရှိပြီးအချိုးမညီ synapses မှာအများစုဖြစ်ပေါ်Zecevic et al ။ , 1989အဆိုပါ hippocampal dentate gyrus ၏), မော်လီကျူးအလွှာနှင့် dorsolateral PFC (Eckenhoff နှင့် Rakic, 1991; သိုးထိန်း 1990) ။ အချိုးကျတဲ့ synapses ပိုပြီး inhibitory များမှာသော်လည်းအချိုးမညီ synapses, သဘောသဘာဝအတွက်အဓိကအား excitatory ဖြစ်ကြသည်။ ဂါဘမြို့သားအာရုံခံ၏သိပ်သည်းဆ (ထိုမူလတန်း inhibitory transmitter ကို) (အသက်အနှံ့တည်ငြိမ်ဖြစ်နေဆဲBrenhouse et al ။ , 2008; ဗင်းဆင့် et al ။ , 1995), dendritic ရိုးတံအပေါ်အချိုးကျတဲ့ synapses ၏အတော်လေးတည်ငြိမ်လူဦးရေမှုနဲ့အပြိုင်အရာ (Zecevic et al ။ , 1989) ။ တံစဉ်များကို၏အခြေခံယန္တရားအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်။ သို့သော်မကြာသေးမီဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း excitatory synapses ၏တံစဉ်များကိုများ၏မျိုးရိုးဗီဇစည်းမျဉ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလျှော့ချ NRG1, neuregulin အချက်ပြပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဗီဇ, (excitatory / inhibitory ချိန်ခွင်လျှာနှင့် Synaptic ရွေးချယ်ရေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါHarris က et al ။ , 2009) ။ neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူပြောင်းလဲသွားလည်း, ကျော့ကွင်းရှုပ်ထွေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော presynaptic ပရိုတိန်းတွေဟာအရာ Complexins ။ Complexin2(CX2), excitatory synapses တစ်အမှတ်အသားလူသားများအတွက်အသက် 10 နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကုန်းပြင်၏ curvilinear ပုံစံပြသသည်။ ဆနျ့ကငျြ, inhibitory synapses နှင့်ဆက်နွယ်သော 1 complexin (CX1) သိပ်သည်းဆ, တဖြည်းဖြည်း (လူ့ dorsolateral PFC အတွက်ငယ်ရွယ်လူကြီးတဆင့်မြင့်တက်Salimi et al ။ , 2008).
glutamatergic synapses မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲသွားနေစဉ်, ဂါဘမြို့သားလည်းဖော်ပြထားခြင်းထမ်းသောလေးနက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကိုပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ glutamatergic ပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံအဆောက်အဦးများမှာသော်လည်းဤအဂါဘမြို့သားအပြောင်းအလဲသဘောသဘာဝအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အစပိုင်းမှာဂါဘမြို့သားအစောပိုင်း postnatal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် excitatory လုပ်ရပ်များရှိပါတယ်။ ဂါဘမြို့သားကြွက်များတွင်အသက်တာ၏ဒုတိယအပတ်အတွင်း transitions ကြောင်းကလိုရိုက်ရုပ်သံလိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆင့်၎င်း၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယျဆိုတာကို; ဂါဘမြို့သား (လူကြီးတဆင့်ဒီ inhibitory အရေးယူထိန်းသိမ်းထားဗင်္ Ari, 2002) ။ ဤသည် excitatory-inhibitory အကူးအပြောင်း Synaptic ဖှံ့ဖွိုးတိုးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းကယ်လစီယမ်အဆင့်ဆင့်အတွက်ကြီးမားသောလှို, (ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗင်္ Ari, 2002) ။ အစောပိုင်းမွငျ့မားကလိုရိုက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ယန္တရား၏မွေးကင်းစကလေးပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ဥပမာ, အ Na (+) - K သည် (+) - 2Cl (-) cotransporter [NKCC1]) (လူကြီးအတွက် cortical circuitry အတွက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ဝမ်နှင့် Kriegstein, 2010) ။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤသငြ်ကူးေူပာင်းမြကာလအတွင်းတွင် neuron လှုပ်ရှားမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုအမြဲတမ်းနု circuitry re-ပနျးပုထုနိုင်ဘူး။
ဂါဘမြို့သားအာရုံခံပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ (၏လူဦးရေအကြားအချက်အလက်များ၏ spatiotemporal စီးဆင်းမှုထိန်းညှိကြောင်း feedforward နှင့်တုံ့ပြန်ချက်ယန္တရားများတစ်ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှုတွေမှတဆင့် cortical လှုပ်ရှားမှုတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍConstantinidis et al ။ , 2002; di Cristo et al ။ , 2007) ။ ရှုပ်ထွေးသောသိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့ (၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအပြိုင်အတွက်ရင့်ကျက်ဂါဘမြို့သားဤ inhibitory လုပ်ရပ်များLuna et al ။ , 2010) နှင့်လူသားတွေအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသိသိသာသာတိုးမြှင့် (Lewis က et al ။ , 2004), Non-လူ့မျောက်ဝံများ (Cruz et al ။ , 2003; နိုင်ကြောင်း et al ။ , 1998) သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင် (Tseng နှင့် O'Donnell, 2007) ။ ဂါဘမြို့သားအဓိကအားပရိုတိန်း parvalbumin, calbindin နှင့် calretinin binding ဟာကယ်လစီယမ်ကိုဖော်ပြသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေအတွက်ကိုတွေ့သည်။ ဤမတူညီသောပရိုတိန်း၏ Immunohistochemistry ဂါဘမြို့သားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, parvalbumin-immunoreactive အာရုံခံနှင့်ဂါဘမြို့သားအမြှေးပါး Transporter (GAT1) non-လူ့မျောက်အတွက်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်စောစောအသက်တာ၌အထွတ်အထိပ်နှင့်အသက် 15 လအတွင်းသည်အထိတိုးမြှင်ရှိနေဆဲ, ပြီးတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့် (ရန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသုတ်သင်Anderson က et al ။ , 1995; အခြေအနေ et al ။ , 1996; Cruz et al ။ , 2003) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, cortical ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ (အ axon ကနဦးအစိတ်အပိုင်းများ၏ဥပမာ gephryin-တံဆိပ်ကပ်ဝေမျှ) ပေါ်သို့ဂါဘမြို့သားသွင်းအားစုသတ်မှတ်သောပရိုတိန်း (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသုတ်သင်Cruz et al ။ , 2009) ။ ဂါဘမြို့သားတို့သည် cortical ဒေသများ (များစွာကို glutamatergic) သို့ကွဲပြားခြားနားသောသွင်းအားစုများ၏မြန်နှုန်းပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့်ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်သတင်းအချက်အလက် synchronizes ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းစိတ္တဇဆင်ခြင်ခြင်းပါဝင်သောပိုမိုမြင့်မား-Level သိမှတ်ခံစားမှုပေါ်ပေါက်ရေးခြင်းဖြင့်သက်သေဖြစ်ပါတယ်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည်နုသည်ဦးနှောက်ဂါဘမြို့သားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း inhibitory ဖြစ်လာမတိုင်မီအသက်တာ၌အစောပိုင်းအပေါ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှပံ့ပိုးနှင့်အတူ excitatory အပြောင်းအလဲနဲ့နေဖြင့်အများစုနေထိုင်ပြီး shaped ဖြစ်ပါတယ်။
2.1.2 Heterosynchrony နှင့်တံစဉ်များကို
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် Heterosynchrony ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သင်တန်းကိုဖြတ်ပြီး pruning ၏အချိန်ကိုက်အတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ Overproduction နှင့်တံစဉ်များကိုပိုပြီးမကြာသေးမီကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူမြင်ခဲ့ပြီး (Giedd et al ။ , 1999a; Giedd et al ။ , 1996b; Giedd et al ။ , 1996c; Sowell et al ။ , 2002; Sowell et al ။ , 2001; Sowell et al ။ , 2004; Tau နှင့် Peterson, 2010) ။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အပြောင်းအလဲများကို MRI နှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ် Over-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရငျ့နှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲတံစဉ်များကိုတစ်ဦးပုံစံအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအပြောင်းအလဲများသည်ဤအကြမ်းဖျင်းအဆိုပါအာရုံခံဆဲလျ၏ unmyelinated အချက်ဖြစ်သကဲ့သို့, အများစု Synaptic အပြောင်းအလဲများကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ အဆိုပါ MRI ချဉ်းကပ်မှုကအခြားချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူမဖြစ်နိုင်ပါရာတစ်ခုတည်းဘာသာရပ်, အတွင်းမျိုးစုံဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ longitudinal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထိုသို့သော longitudinal လေ့လာမှုများ heterosynchrony အချိန်-သက်တမ်းလည်းကုန်ဆုံးသွားပြီရုပ်ရှင် (အတူတူအရာကိုအလွန်ရှင်းလင်းသောမြေပုံများအားပေးအပ်ခဲ့ကြhttp://www.loni.ucla.edu/~thompson/DEVEL/dynamic.html) ။ အဆိုပါ cortex အတွင်းမှာပဲတံစဉ်များကို၏ဤစဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်ပုံစံပထမဦးဆုံး pruning အဆိုပါ sensorimotor cortex ၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆောက်အဦများ, နှောင်းပိုင်း-ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုကျရိုကျထမ်းဘိုးတို့ကိုရှေ့ထို့နောက်အသင်းအဖွဲ့ cortical (အတူရှေ့ဦးတည်ချက်တစ်ခုပြန်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်pause et al ။ , 2008) ။ post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများကြောင့်တံစဉ်များကိုပြသ အတွင်း ယင်းအမြင်အာရုံ, somatosensory, မော်တာနှင့် prefrontal ဒေသများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအလွှာသို့သော်, (တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်Rakic ​​et al ။ , 1986).
ပုံမှန်အားဖြင့်, subcortical ဒေသများ cortical ဒေသများ (Tau နှင့် Peterson, 2010) ထက်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုး။ အဆိုပါ amygdala ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အစောပိုင်းကဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးလိင် dimorphic ဖက်ရှင်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အသက်4နှစ်ပေါင်းဖြင့်၎င်း၏အကျယ်ချဲ့အသံအတိုးအကျယ်ရောက်ရှိအဖြစ်မိန်းကလေးငယ်များမှာ amygdala, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာအတော်လေးအနည်းငယ်သာပြောင်းလဲမှုကိုပြသ; ယောက်ျားလေးများအတွက် amygdala အသံအတိုးအကျယ်တဖြည်းဖြည်း 18% အားဖြင့်အသက်အရွယ် 53 နှစ်တိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါ caudate, putamen နှင့် cerebellum အပါအဝင်အခြားသောဒေသများ, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 15% (ပြန်လည်သုံးသပ် (နေဖြင့်လျော့ကျလာ volumes ကိုအတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအများဆုံးကြွေကြောင်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာတစ်ခု Inverted-ဦးအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုပြသDurston et al ။ , 2001)) ။ ပေးထားသောဖွဲ့စည်းပုံ၏ Subdivisions အတော်လေးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကိုလည်းထင်ရှားခဲ့ကြ (Gogtay et al ။ , 2006) ။ MRI အတူ hippocampus ၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုများအသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး volume ထဲမှာတစ်ဦးကျိုးနွံတိုး (12%) သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒီအချက်အလက်များ၏ Reanalysis ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာ subdivisions အတွင်းဒီကဗျာအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်ဖေါ်။ ဥပမာ, hippocampus ၏ posterior ရှုထောင့်ကို (anterior ရှုထောင့်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိမီးခိုးရောင်ကိစ္စ overproduce နှင့်သုတ်သင်ဖို့ပေါ်လာGogtay et al ။ , 2006; Insausti et al ။ , 2010).
ဤကဲ့သို့သောဒေသဆိုင်ရာမူကွဲစော်ကားဖို့အားနည်းချက်၏ကွဲပြားခြားနားသောကာလကိုအကြံပြုအပြည့်အဝ (ကြောင့်ပေးထားသောဦးနှောက်ဧရိယာ၏ oversampling မှတန်ဖိုးထားရကြပြီမဟုတ်ကြောင်းတည်ရှိစေခြင်းငှါAndersen က, 2003; 2005; Andersen ကနှင့် Teicher, 2008) ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကာလအတွင်းဒုက္ခမှထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်လေ့လာရေးလူသားတွေအတွက် hippocampal မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာအထွေထွေ 12-15% လျှော့ချရေး (ဥပမာ Bremner et al 1997) ကိုပြသနှင့်အထူးသဤစမ်းသပ်မှုအကြီးမြတ်ဆုံးခြင်းကိုသည်းခံသောဤ posterior ရှုထောင့်အပေါ်အဓိကအားအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပွောငျးလဲ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Heterosynchrony (ဥပမာ, ဒေသ, မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနှင့်အလွှာ) စော်ကားမှုအောက်ပါပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလေ့လာနေသည့်အခါအကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။
MRI တပြင်လုံးကိုဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီးမီးခိုးရောင်အမှု၌အပြောင်းအလဲများဆန်းစစ်ဘို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောခဲ့ပေမယ့်, ဒီချဉ်းကပ်နည်းဟာကွဲပြားခြားနားသော neurotransmitter စနစ်များအတွင်းဖြစ်ပျက်သောပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများကန့်သတ်နားလည်မှုပေးပါသည်။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စတိုင်းတာထိုကဲ့သို့သောအထက်တွင်ဆှေးနှေးခဲ့သူတွေကိုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်တန်းကာလအတွင်းထင်ရှားသော functional ကိုပြောင်းလဲ, မပြဘူး Synaptic သိပ်သည်းဆ၏ရေနံစိမ်းခန့်မှန်းချက်ကိုထင်ဟပ်။ သို့သော်လူ့ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာတစ်ရှူးအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဗီဇထုတ်ဖော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ဆိုလိုသည်မှာ, MRI နှင့်အတူမဖြစ်နိုင်ပါတစ်ခုထိုးဖောက်ချဉ်းကပ်မှု) ဒီကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများ၏သဘောသဘာဝအတိုင်းနောက်ထပ်သဲလွန်စပေးနိုငျသညျ။ axon လမ်းညွှန်မှု, morphogenesis နှင့် synaptogenesis အပါအဝင်အာရုံခံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောဗီဇ, (ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လျှော့ချနေကြသည်Harris က et al ။ , 2009) ။ တိကျသောဥပမာ netrins, semaphorins, neuropilin, neurexin နှင့် neurolignin ပါဝင်သည်။ neurexin အတွက်ခေတ်-related အပြောင်းအလဲများကိုတံစဉ်များကိုနှင့်ကြွက်များတွင် 45 နှင့် 90 ရက်ပေါင်းအကြားလေ့လာတွေ့ရှိဗီဇစကားရပ်အတွက်အပြိုင်သိသိသာသာလျှောက်လျော့နည်း (ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သော axon ရုပ်သိမ်းမှုတသမတ်တည်းများမှာCressman et al ။ , 2010) ။ microarray နှင့်အတူဗီဇစကားရပ်၏စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆယ်ကျော်သက် overproduction နှင့်တံစဉ်များကိုပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုသစ်ကိုမျိုးဗီဇအပေါ်အလင်းကိုသွန်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး cytoskeletal စပျစ်သီးပြွတ် (25 ဖော်ထုတ်), တစ်ဦး Ras / GTP-related စပျစ်သီးပြွတ် (12 ဖော်ထုတ်), နှင့် lipid ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့် Steroid တစ်မျိုး-related ဖြစ်စဉ်များစပျစ်သီးပြွတ် (13 ဖော်ထုတ်): ထိုကဲ့သို့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်မျိုးဗီဇသုံးအဓိကအလုပ်လုပ်တဲ့ပြွတ်သို့အုပ်စုဖွဲ့။ အဆိုပါ cytoskeletal စပျစ်သီးပြွတ်တတိယစပျစ်သီးပြွတ်အများဆုံးဖွယ်ရှိ myelination နှင့် pubertal-related ပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်သော်လည်းအဆိုပါ Ras / GTP စပျစ်သီးပြွတ်နောက်ထပ်, အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုအကြံပြု, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းခန္ဓာဗေဒပြန်စီစဉ်၏အဆငျ့ reifies ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူ့အာရုံကြောဆဲလ်ကော်မော်လီကျူး (NCAMs) ပရိုတိန်းအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ထိပ် (ဤဗီဇ function ကြွက်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့အပြိုင်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်ကိုသရုပ်ပြကော့ et al ။ , 2009).
မျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာမအားလုံးပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံအဆောက်အပရိုတိန်းနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, glucocorticoid receptors နဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့်မျိုးဗီဇ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲသွားPerlman ဟာ et al ။ , 2007; Pryce, 2008) ။ လူသားများနှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများခုနှစ်, glucocorticoid မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးနှင့်အထွတ်အထိပ် receptors ။ ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း GRalpha-A နှင့် 67-KDA GRalpha ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကအတွက် peaking နှင့်နောက်တဖန်နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် isoforms နှင့်အတူသို့သော် glucocorticoid receptors (ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း) တွင် isoforms ကွဲပြားခြားနားဘယ်နေရာတွေမှာလဲပြသ; ဆနျ့ကငျြဘ၌, GRalpha-D ကိုမူကွဲထိပ်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နဲ့အဲဒီနောက် (Sinclair et al ။ , 2010) လျော့နည်းစေပါသည်။ ဤရွေ့ကားထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းပရိုတိန်းပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက်အများစုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဒါပေမယ့်မွေးကင်းစကလေးအဖြူကိစ္စ astrocytes မှယာယီစကားရပ်ကိုပြသထားပါသည်။
heterochrony ရှင်းပြစေခြင်းငှါ 2,979 မျိုးဗီဇ၏တစ်မူထူးခြားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာမျိုးဗီဇ၏ 58% ကိုအကြားပိုမိုနှေးကွေးရငျ့အဘို့အကောင့် (သောဤအမှုကား, dorsolateral PFC နှင့်လူသားအတွက် caudate နျူကလိယထဲတွင်ထိုအမျိုးဗီဇ differential ဒေသများအကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ဖြစ်ပါသည်) cortical နှင့် subcortical ဒေသများ (Somel et al ။ , 2009) ။ မျိုးဗီဇလည်း heterochrony နှင့် postnatal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်သက်. လူသားများနှင့်ချင်ပန်ဇီမျောက်အကြားမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုများအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ချင်ပန်ဇီမျောက်ညျလူသားတို့နှင့်အတူကြီးမြတ် homology share, ဒါပေမယ့် heterochrony နားလည်ရန်နောက်ထပ်ချဉ်းကပ်ပေးသည်သောတာရှည်သက်တမ်းရှိသည်။ ဒီနှိုင်းယှဉ်များတွင်အလားတူမျိုးဗီဇစကားရပ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာင့်ကျက်မှုစတင်ခြင်းမှာမျိုးစိတ်အကြား divergesSomel et al ။ , 2009), မီးခိုးရောင်ကိစ္စဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ။
2.1.3 ။ လိင်မှီခို
လူသားတွေအတွက် MRI shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်လေ့လာမှုများအထီး subcortical အဆောက်အဦများ (တှငျတှေ့အပိုဆောင်းလိင်ကွဲပြားမှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးထက် 9% ပိုမိုကြီးမားနှောက်အသံအတိုးအကျယ်ရှိသည်ကိုပြသGiedd et al ။ , 1996a) ။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယအမျိုးသမီးအတွက်ပိုကြီးတဲ့, ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကွဲပြားခြားနားမှုအရွယ်အစားတိုး၏နှုန်းထားများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အဆိုပါ amygdala ၏အရွယ်အစား hippocampal အရွယ်အစားအဘို့အစောင့်ကြည့်လေ့လာဆန့်ကျင်ဘက်အတူအမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးပွားစေပါသည်။ အမျိုးသမီး caudate အရွယ်အစားအသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာမပြောင်းပါဘူးသော်လည်းအဆိုပါအထီး caudate (အရွယ်အစားကျုံ့Giedd et al ။ , 1996a) ။ Caviness et al (Caviness et al ။ , 1996) အမျိုးသမီးအတွက်) ထို subcortical forebrain nuceli (neostriatum ပြသတဲ့ထုထည်ကြီးမားသော MRI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူအသက်အရွယ် 7-11 အကြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသံအတိုးအကျယ်မှာရှိပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, တူညီတဲ့အသက်အရွယ်၏ယောက်ျားအတွက်တူညီတဲ့အဆောက်အဦများဟာသူတို့ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသံအတိုးအကျယ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဆိုလိုခြင်းဖြင့်လူကြီးမတိုင်မီ Regression ရမည်ဖြစ်သည်။ ကြွက်များတွင်လူကြီးအသုံးပြုပုံအရွယ်ရောက်ယောက်ျား 18% အမျိုးသမီးထက်ပိုကြီးတဲ့ ventral medial PFC (mPFC) ရှိသည်, ကြောင်း (နည်းပါးလာအာရုံခံ (အထီးမှ 13% ဆွေမျိုး) နှင့် glia ဆဲလ် (18%) နှစ်ဦးစလုံးမှ attribute ဖြစ်ပါတယ်Markham et al ။ , 2007) ။ အလားတူအပြောင်းအလဲများကိုအထီး 20% မှအမျိုးသမီးထက်ပိုပြီးအာရုံခံအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့် ~ 19% ပိုမိုမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ရှိသည်ဘယ်မှာကြွက်မူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex, (တှငျဖျောပွထားပြီNunez et al ။ , 2002; ရိဒ်နှင့် Juraska, 1992).
ဘယ်လိုကဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု function ကိုအဓိကအားဖြင့်ထင်ကြေးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဟာသူ Pruning (အပြောင်းအလဲနဲ့ချောမွေ့ယုံကြည်Changeaux et al ။ , 1976; Purves နှင့် Lichtman, 1980) ။ ဦး နှောက်အာရုံခံကွန်ယက်များကိုရင့်ကျက်သော ဦး နှောက်တွင်တည်ဆောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကွန်ယက်အတွင်းရှိမလိုအပ်သောအရာများသည်မလုံလောက်။ synapses များကိုခုတ်ထွင်လိုက်သည်။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း synaptic သိပ်သည်းမှုနှင့်ဆဲလ်အရေအတွက်လျှော့ချခြင်းသည်အပြောင်းအလဲ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ ဤဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများသည်ဂလူးကို့စ်အသုံးပြုမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည် (တံတားမဖြတ်ခင်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားသော ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှု၏ညွှန်ကိန်း၊ အခန်း ၄.၁ တွင်ဆွေးနွေးထားသည်) ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ဆိုးကျိုးများသည်မလွဲ when သည့်အခါထင်ရှားပေါ်လွင်သည်။ ယောက်ျား၏ caudate သည် Tourette's Syndrome နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity disorder အပါအဝင်အလေ့အထနှင့်မော်တာနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအတွက်ပိုမိုအန္တရာယ်များနှင့်ဆက်စပ်သောတံစဉ်များကိုခံယူရသည်။Teicher နှင့် Andersen က 1995) ။ အလေ့အထနဲ့ဆက်စပ်နေရာများရငျ့နှင့်အတူ်ဖြစ်လာဖို့များပါတယ်; အဆက်မပြတ် updated လျက်ရှိသည်အသစ်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်သည်အခြားဒေသများတူညီအတိုင်းအတာအထိ pruning ခံယူမပြုစေခြင်းငှါ (Teicher et al ။ 1995) ။ အဆိုပါ mPFC အပါအဝင်မည်သည့်ဒေသတွင်နည်းပါးလာအာရုံခံ, အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်းအတွက်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်။
လိင်ကွဲပြားမှု (မကြာသေးမီကအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်နုဦးနှောက်ပုံဖော်ကြောင်း gonadal ဟော်မုန်းများကအစောပိုင်းအသက်တာ၌ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ Viveros et al, 2010) ။ "ပုလ်" ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအပါအဝင်အာရုံကြော aromatase အားဖြင့်အီစထိုဂျင်မှအန်ဒရိုဂျင်၏ပြောင်းလဲခြင်းဦးနှောက် function ကိုအပေါ် gonadal steroids များ၏သက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ, အမွေးကင်းစကလေးများကာလအတွင်းအမျိုးသမီးဦးနှောက် (MacLusky et al ။ , 1994) ။ non-လူ့မျောက်အတွက်အစောပိုင်းအဆင့်မြင့်ဆှဖှေဲ့အန်ဒရိုဂျင်-binding က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်အင်ဇိုင်းတွေ၏စကားရပ် hypothalamus အတွက်အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, amygdala, dorsolateral နှင့် Orbital PFC နှင့် somatosensory cortex (: Clark က et al 1989; ကြွက်: ရိဒ်နှင့် Juraska, 1992)) ။ ဦးနှောက်အတွက် testosterone ဟော်မုန်း၏မွှေးကြိုင်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့တာဝန်ရှိဖြစ်သောလိင်ဟော်မုန်းဆုံးဖြတ်ရန်ကပိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ non-aromatizable အန်ဒရိုဂျင်အသုံးပြုစမ်းသပ်ချက်, 5α-dihydrotestosterone (DHT), ဤအတီးရွိုက်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ကူညီပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုအနိမ့်မျိုးစိတ်သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇကိုမူမမှန်၏လေ့လာမှုကန့်သတ်ထားပါသည်။
အဆိုပါမျိုးရိုးဗီဇကိုမူမမှန် XXY (ဥပမာ Klinefelters) ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဖြင့်သဘာဝစမ်းသပ်ချက်များတွင် (ဤလူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် insula, ယာယီ gyri, amygdala, hippocampus အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျှော့ချပွီ, cingulate-ဒေသများGiedd et al ။ , 1996a) ။ လူသားမြားသညျပိုမိုမကြာသေးမီစရိုက်လက္ခဏာတွေ (ယောက်ျားလေးများ (r = 0.32) တွင် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအပြုသဘောခြုံငုံမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်အဆိုးမိန်းကလေးတွေအတွက် estradiol အဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့သတင်းပို့ (r = -0.32) နှင့်Peper et al ။ , 2009) ။ ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုသို့သော်, (r = -0.72) ဤသို့သောမိန်းကလေးများအတွက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus နှင့်အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်အကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးအဖြစ်တည်ရှိနေပါနဲ့။ ထို့အပြင်အန်ဒရိုဂျင်၏ထိန်းသိမ်းရေးအစောပိုင်းအသက်တာ၌ cortical function ကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုကန့်ကွက်ခြင်း, PFC နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်, ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးနှင့်သာမန်အမျိုးသမီးမှဆွေမျိုးအန်ဒရိုဂျင်-ထိတွေ့အမျိုးသမီး (သာမန်အတွက် သာ. ကောင်း၏Clark ကနှင့် Goldman-Rakic, 1989) ။ ဆနျ့ကငျြ, လိင်ဟော်မုန်းပမာဏအတွက် pubertal တိုး (subcortical dopamine function ကိုအပေါ်အဖွဲ့အစည်းအပေါ်သက်ရောက်မှုများကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါအရာ Pre-သွေးခုန်နှုန်းတားစီး, attenuateမောရစ် et al ။ , 2010).
ကြွက်လေ့လာမှုများ ((ထို prelimbic နှင့် infralimbic ဒေသများအပါအဝင်) မွေးကင်းစကလေးများအီစထိုဂျင်အမျိုးသမီး ventromedial PFC အတွက်အာရုံခံ overproduction ဖိနှိပ်ကြောင်းအကြံပြုJuraska နှင့် Markham, 2004; Markham et al ။ , 2007), ဥပမာလူကြီးများအတွက် hippocampus ကဲ့သို့သောအခြား ဦး နှောက်ဒေသများရှိကျယ်ပြန့် arborization လှုံ့ဆော်ရန်အီစထိုဂျင်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်မတူဘဲHajszan et al ။ , 2009; Toran-Allerand, 1996) ။ Prepubertal ovariectomy (အမျိုးသမီးအတွက်အနိမ့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကိုရှင်းပြပါစေခြင်းငှါအရာ, အမျိုးသမီးအတွက်အာရုံခံသိပ်သည်းဆကိုလျော့နည်းစေNunez et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အထီး amygdala (အတွင်း dendrites ၏တံစဉ်များကိုအတွက်အပျိုဖော်ဝင်အကူအညီစဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်း၏ Rising အဆင့်ဆင့်Zehr et al ။ , 2006) ။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများ gonadal ဟော်မုန်းဟာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် sculpting အတွက်ရှုပ်ထွေးအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။
2.2 ။ အဲဒီ receptor စနစ်များ Overproduction နှင့်တံစဉ်များကို
monoamine receptors ၏ 2.2.1 Overproduction
အဲဒီ receptor စနစ်များ၏ overproduction နှင့်တံစဉ်များကို Synaptic အပြောင်းအလဲများကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ပြီး, သိပ်သည်းဆအတွက်အသက်အရွယ်-related ပြောင်းလဲမှုများနှစ်ခုလှိုင်းတံပိုးပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ dopamine အပါအဝင် neurotransmitter စနစ်များတစ်ဦးကနံပါတ်တစ်ခု, (Gelbard et al ။ , 1990; Kalsbeek et al ။ , 1988; Lankford et al ။ , 1988; Todd, 1992), norepinephrine (Feeney နှင့် Westerberg, 1990; Kline et al ။ , 1994) နှင့် serotonin (Kuppermann နှင့် Kasamatsu, 1984; Lauder ကနှင့် Krebs, 1978; Whitaker-Azmitia နှင့် Azmitia, 1986) ကဦးနှောက်ထဲမှာအသက်အရွယ်-ကန့်သတ်ထား trophic အခန်းကဏ္ဍရှိသည်။ အစောပိုင်း postnatal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်တန်းကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောအဲဒီ receptor Subtype ၏ Ectopic စကားရပ်တိုးချဲ့ Synaptic ပေါက်, axon ကြီးထွားမှု, နှင့် synapses ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာ, hippocampus အတွင်း serotonin 5-HT7 receptors ၏ ectopic စကားရပ်ကြွက်များတွင်အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်း (ကာလအတွင်းခေတ္တဖြစ်ပေါ်Louiset et al ။ , 2006; Vizuete et al ။ , 1997) ။ အလားတူပဲ, serotonin Transporter (5-HTT) postnatally P0-P10 (အနည်းဆုံးသန္ဓေသား cortical နှင့် striatal neuroepithelia နှင့်အာရုံခံ thalamic လမ်းကြောင်းထဲမှာ Non-serotonergic အာရုံခံတွင်တွေ့ရှိပါသည်zhou et al ။ , 2000) ။ အဆိုပါ 5-HTT ၏ယာယီစကားရပ်နှင့် vesicular monoamine Transporter (VMAT) ကိုလည်း (ထို hippocampus, ဦးနှောက် cortex, septum နှင့် amygdala အတွက်အာရုံခံ cranial အာရုံကြောများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်Lebrand et al ။ , 1998) ။ ဤရွေ့ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ် receptors အာရုံခံ innervation လမ်းပြယုံကြည်ကြသည်။ trophic neurotransmitters ၏ဆိုးကျိုးများ (အာရုံစူးစိုက်မှု-မှီခိုနေကြMazer et al ။ , 1997), အခြေခံအဆင့်ဆင့်အကျိုးသက်ရောက်၏သဘောသဘာဝအဘို့အ Integrated အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု။ အလားတူ ectopic အဲဒီ receptor စကားရပ်တွင်အဖြူရောင်အမှု၌လေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, noradrenergic အဲဒီ receptor α2 (ထိုကြွက်များတွင်နုအဖြူအမှု၌လေ့လာတွေ့ရှိနေသည်Happe et al ။ , 2004) ။ သို့သော်အားလုံးအဲဒီ receptor စကားရပ်တစ်ခု trophic အခန်းကဏ္ဍမဟုတ်ပါဘူး။
Over-expression ကိုအဲဒီ receptor ၏ဒုတိယလှိုင်းထားတဲ့ receptors နှင့်ယန္တရားများလူကြီးသို့သည်းခံရ၏ကြောင်းစကားရပ်အဆင့်ဆင့်အတွက်ရလဒ်များကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုပြောင်းပြန်လှန်ဦး-ပုံသဏ္ဍာန်ကွေးပြသအချက်ပြနေစဉ်အတွင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လူကြီးများကလုံးဝနီးပါးပျက်ကွက်ကြောင်း ectopic, ယာယီစကားရပ်မတူဘဲ, receptors ဤလူဦးရေတဖြည်းဖြည်းအထွတ်အထိပ်ထနှင့်ရငျ့စဉ်အတွင်းကျဆင်း။ ဆယ်ကျော်သက်အဲဒီ receptor အပြောင်းအလဲများတစ်ဦးကသုံးသပ်မှုတှငျတှေ့ရှိရ၏ စားပွဲတင် 1, limbic နှင့် cortical ဒေသများအတွင်း receptors တခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားအတူ။ overproduction နှင့်တံစဉ်များကို၏ timecourse ဒေသတွင်း-မှီခိုဖြစ်ပါတယ် (Andersen က et al ။ , 2000), နှင့်အမှတ်အသားများ၏ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်းကြည့်ရှုလေ့လာသည်။ မတူညီတဲ့အဲဒီ receptor စနစ်များပါဝင်သည်: dopamine, serotonin, norepinephrine, အချိုမှု, ဂါဘမြို့သား, neurotensin, endocannabinoid နှင့် cholinergic (Andersen က et al ။ , 2000; Eggan et al ။ , 2010; Lidow et al ။ , 1991) ။ မျောက်တွေကိုခုနှစ်, Lidow et al (Lidow et al ။ , 1991) receptors တွေရဲ့သိပ်သည်းဆ synaptogenesis နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ receptors ၏အသက်အရွယ်-related ဖြန့်ဝေဆန်းစစ်ဖို့ microcircuits အပေါ်ထပ်မံအာရုံစူးစိုက်ပါလျှင်, မကြာသေးမီရလဒ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း ပို. ပင်ရှုပ်ထွေးအပြောင်းအလဲများကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ receptor ဖြန့်ဖြူးသူ့ဟာသူကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံ phenotypes အကြားပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, D1 dopamine receptors GABAergic အာရုံခံ (အပေါ်လူကြီးမှ Post-နို့ဖြတ်တဲ့အသက်အရွယ်အကြားသိသိသာသာသူတို့ရဲ့စကားရပ်အဆင့်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မထင်ကြဘူးBrenhouse et al ။ , 2008; ဗင်းဆင့် et al ။ , 1995) ။ ဆနျ့ကငျြ, D1 receptors ၏ overproduction နှင့်တံစဉ်များကို (glutamatergic output ကိုအာရုံခံအပေါ်သိသိသာသာဖြစ်ပေါ်Brenhouse et al ။ , 2008) ။ အထူးသညျဤ glutamatergic စီမံကိန်း၏သာ 2%, လူငယ်ကြွက်များတွင် D1 immunoreactive များမှာ P44 မှာ% 40 မှမြင့်တက်နှင့် P6 မှာရင့်ကျက်နှင့်အတူ 100% ဆင်းကျသွား။ အခြားအ receptors မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကအခြားအာရုံခံ Subtype အပေါ် differential ကိုစကားရပ်ကိုပြခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စားပွဲတင် 1 အခြားအ receptor အတန်းအပြောင်းအလဲများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်တိကျတဲ့အာရုံခံအမျိုးအစားများအပေါ်ဖော်ထုတ်ခြင်းပုံမှန်အားဖြင့်သိသည်မဟုတ်။ ဆနျ့ကငျြ, D2 receptors (အပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက်အစာရှောင်ခြင်း-spiking ဂါဘမြို့သား interneurons ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတားစီးO'Donnell, 2010; Tseng နှင့် O'Donnell, 2007) ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံထိထိရောက်ရောက် Real-time အတွက်မျိုးစုံသွင်းအားစုပေါင်းစပ်ဘို့အရေးကြီးလှသည်။ ထို့ကြောင့် microcircuits နှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်အတွင်းအဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွား။
အဲဒီ receptor စကားရပ်များတွင်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့အအစောဆုံးအထောက်အထားကို DA နှင့် 5HT အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ (19-30 နှစ်ပေါင်းထံမှပိုပြီးအထီးအတွက်အမျိုးသမီးထက်ငြင်းပယ်ဘယ်မှာလူသားတစ်ဦးပေလေ့လာမှုကနေကြွလာWong က et al ။ , 1984) ။ ကျနော်တို့အမျိုးသမီးလျော့နည်းအဲဒီ receptor overproduction နှင့်လျော့နည်းတံစဉ်များကို (သရုပ်ပြအတူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်စဉ်အတွင်း striatum အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုလည်းသရုပ်ပြပါပြီAndersen က et al ။ , 1997) ။ ဥပမာအားဖြင့်, D2 receptors တွေရဲ့သိပ်သည်းဆ 144 နှိုင်းယှဉ်ယောက်ျားအတွက် 26 ± 31% တိုးတက်ကြွက်များတွင်အသက်7နှင့် 25 ရက်ပေါင်းအကြားအမျိုးသမီးအတွက် 40% ±။ အလားတူပဲအဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများအတွက်အများကြီးကြီးနှင့် 40 နှင့် 120 ရက်ပေါင်း (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) အကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ D1 striatal သိပ်သည်းဆယောက်ျားအတွက်, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးအတွက်သာ 34 ± 4% အားဖြင့်7± 8% လျော့နည်းသွားသည်။ နျူကလိယ accumbens အဘို့, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို D1 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆခါးဆစ်ချင်းစီ 40 ရက်ပေါင်းမှာအနည်းငယ်ကျဆင်းလာသရုပ်ပြအတူအသက် 80 ရက်အကြာမှာအပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် D1 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု D120 receptors အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားများတွင်% သာ. ကြီးမြတ် 1 ± 57.8 ခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာ P21.2 မှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ယေဘုယျအား, အနျူကလိယ accumbens အတွက် D2 သိပ်သည်းဆမကျားခြားနားချက်ရှိ၏။ အဆိုပါ striatal လိင်ခြားနားချက်, သို့သော်, (ထိုဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကာလအတွင်း gonadal ဟော်မုန်းထိန်းသိမ်းရေးမှအာမင်မဟုတ်ခဲ့Andersen က et al ။ , 2002) ။ Gonadectomy ချက်ချင်း D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor overproduction မတိုင်မီမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းခြုံငုံသိပ်သည်းဆ modulate ဘဲ, မ gonadectomy အစောပိုင်းကအသက်တာ၌ပြုလေ၏။ ဤရလဒ်သည် testosterone ဟော်မုန်းမှ peripubertal ထိတွေ့ dopamine အဲဒီ receptor overproduction လှုံ့ဆော်ပါဘူးကြောင်းအကြံပြု, မအီစထိုဂျင်ယေဘုယျအားဖြင့် overproduction ဖိနှိပ်ထားဘူး။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ကန့်သတ်မှုလိင်-မှီခိုပြောင်းလဲမှုများလေ့လာရေး precluded ကြပေမည်။ autoradiography ခြုံငုံတစ်ဒေသအဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအပြောင်းအလဲများကို quantifying များအတွက်ကောင်းစွာ-သင့်တော်ပါတယ်သွားရမည်အကြောင်း, ဒီ technique ကိုဤအ receptors ဖော်ပြအာရုံခံ၏ထားတဲ့လူဦးရေထုတ်ဖေါ်ဖို့ပျက်ကွက်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေသွင်ပြင်လက္ခဏာခံရဖို့သေးရှိသည်သောအာရုံခံ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေအပေါ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလိင်-မှီခိုသောအပြောင်းအလဲနှင့်၎င်းတို့၏ဟော်မုန်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုထိုကဲ့သို့သောအဲဒီ receptor-တိကျတဲ့ agonists သို့မဟုတ်ရန်တုံ့ပြန်ဆနျးစစျသောသူတို့ကိုအဤအဲဒီ receptor အပြောင်းအလဲများကို၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (အချက်ပြယန္တရားများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု gonadal ဟော်မုန်းကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်ကိုသတိပြုပါ, စမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုခံယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်Andersen က et al ။ , 2002; Kuhn et al ။ , 2001).
3.1 ။ neurotransmitter စနစ်များတိကျတဲ့ innervation
ဤအပိုင်းကိုတှငျကြှနျုပျတို့ neurotransmitter စနစ်များပေးထားသောဦးနှောက်ဒေသ innervate ဘယ်လိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆွေးနွေးပါ။ Innervation မွေးဖွားမီကစတင်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်တက်ကြွစွာဆယ်ကျော်သက်ကာလနှင့်လူကြီးသို့ဆက်လက်။ သို့သော်အများဆုံးလေ့လာမှုများ characterizing မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုရှောင်ကွင်းပြီး linear ဖက်ရှင်အတွက် innervation ရရှိသောယူဆ။ ဦးနှောက်တစ်သျှူးအရင်းအမြစ်စင်တာပုံမှန်အားကျေးရွာအုပ်စုသဲလွန်စတားဆီးကြောင်းသေးငယ်ဒေသများသို့ဦးနှောက်တစ်ရှူးခွဲစိတ်အဖြစ်ဆက်သွယ်မှုလူ့ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများ, လုပ်ဆောင်သွားရန်နီးပါးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ MRI ၏ဆုံးဖြတ်ချက်၏ကျေးရွာအုပ်စုသဲလွန်စခွင့်မပြု တိကျတဲ့အာရုံခံလူဦးရေ (တစ်ပြိုင်နက် myelin နှင့် axon caliber နှစ်ဦးစလုံးအကဲဖြတ်ရန်သော tractography မှတဆင့်ထက်အခြား) တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ဆကျသှယျ။ Transporter သိပ်သည်းဆမကြာခဏ innervation ပုံစံများ (ဥပမာ, (တစ်ဦးညွှန်ပြချက်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်Moll et al ။ , 2000)) ။ သို့သျောလညျး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုလွတ်လပ်စွာ innervation ၏ကွဲပြားစေခြင်းငှါဤသို့ထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထွက်ရှိသောတော်ပါတယ်မည်မဟုတ်ပါ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အနှစ်သာရကမှစံ tracing နည်းလမ်းများအသုံးပြုအနည်းငယ်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးအချို့ (ဥပမာ (ရငျ့ဖြတ်ပြီး innervation တစ် linear တိုးတက်မှုပြသBrenhouse et al ။ , 2008; Brummelte နှင့် Teuchert-Noodt, 2006; Cunningham et al ။ , 2002; နိုင်ကြောင်း et al ။ , 2000), (အခြားသူတွေသော်လည်းCressman et al ။ , 2010; Rios နှင့် Villalobos, 2004) တစ်ခု inverted ဦး-ပုံသဏ္ဍာန်ပုံစံသရုပ်ပြပါ။ ကျနော်တို့ကို (နျူကလိယသို့ medial PFC ၏အလွှာ V ကိုအချိုမှုအာရုံခံ၏ innervation တစ် linear တိုးတက်မှုကြွက်များတွင် 25, 44 နှင့် 100 ရက်ပေါင်းအကြားအဓိက accumbens လေ့လာတွေ့ရှိပါပြီBrenhouse et al ။ , 2008) ။ Cunningham နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (ကလေ့လာမှုမှာCunningham et al ။ , 2002), တစ်ဦး linear innervation ပုံစံကိုလည်းကြွက်နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / ငယ်ရွယ်လူကြီး (အသက်၏ 60 ရက်ပေါင်း) သို့မွေးဖွားထံမှဆက်လက်သော amygdala နှင့် PFC အကြား glutamatergic ဆက်သွယ်မှုအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ Synaptic ဆက်သွယ်မှုအတွက်ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ်ကောင်းစွာအရည်အသွေးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အချိုမှုအာရုံခံ GABAergic အာရုံခံအပေါ် axo-dendendritic (36.5%), axo-spinous (7.7%), နဲ့ axo-somatic synapses (5.8%) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမယ့် 17.3%, 30.8% နှင့် 1.9% Non-GABAergic အာရုံခံပေါ်မှာ။ ဤအအဆက်အသွယ်ဖွဲ့စည်းခြင်းယေဘုယျအားဖြင့်အသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတစ် curvilinear ပုံစံနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
ဆနျ့ကငျြ, innervation အချို့ပုံစံများဟာသူတို့ရဲ့ဒုံးကျည်သွားလမ်းထဲမှာ Non-linear သင်တန်းများပြသပါ။ (ဥပမာ, basolateral amygdala ဖို့ medial PFC (prelimbic နှင့် infralimbic ဒေသများနှစ်ဦးစလုံး) အဆိုပြုချက်များကယင်းကြွက်များတွင်အသက် 25 နှင့် 45 ရက်ပေါင်းတို့အကြားတည်ငြိမ်ရှိနေဆဲ, ဒါပေမယ့် 50 နှင့် 45 အကြားအကြောင်းကို 90% အထိလျော့ကျCressman et al ။ , 2010) ။ အလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အသက်တာ၏တတိယအပတ်တွင်တစ် 13% လျော့နည်းသွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အသက် 67 ရက်ပေါင်းအထိတိုကျရိုကျ cortex တိုးဖို့ dorsalmedial thalamus ထံမှ Afferents, သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့် stabliize သည်အထိတိုးမြှင့်သည့်အခါ (Rios နှင့် Villalobos, 2004) ။ innervation ၏ပထမဦးဆုံး Over-ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကြောင့်အချိုမှု input ကို drive ကို synaptogenesis အကြံပြုခြင်း, အလွှာ III ကိုအာရုံခံ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Dopamine အာရုံခံအဆိုပါမျောက် cortex (ဒေသများတွင် 4, 9, 46) တွင် innervation တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ပုံစံကိုလိုက်နာ: အလွှာ III ကိုအတွက် dopaminergic axon အလွှာ5နဲ့ V (မလေးမွတျပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူအသက် 7-1 လအတွင်းမတိုင်မီသုံးခြံတိုးလာနိုင်ကြောင်း et al ။ , 1998) ။ တံဆိပ်ကပ် varicosities (တည်ငြိမ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်မှကျဆင်းနေမတိုင်မီအသက်တိရိစ္ဆာန်များ 2-3 နှစ်ပေါင်း (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်) တွင် (အငယ်ဆုံးမျောက်တွေကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်ခြောက်ခေါက်) ကအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိ, တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်Rosenberg ကနှင့် Lewis က, 1995; ဝူး et al ။ , 1997) ။ တက်လာတယ်, အလားတူပုံစံသရုပ်ပြပါ။ အဆိုပါ amygdala သို့ Dopamine innervation နှောင်းပိုင်းတွင်လူကြီးသို့တည်ငြိမ်ကြောင်းအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းသိပ်သည်းဆအတွက်အနည်းငယ်ကျဆင်းလာ (မီ, တက်လာတယ်, ဘဝအတွင်းပထမဆုံးသုံးပတ်တိုးပွါးBrummelte နှင့် Teuchert-Noodt, 2006) ။ ထို့ကြောင့်အခြား neurotransmitter စနစ်များ innervation ပုံစံများအလားတူအပြောင်းအလဲများပြသသော (နှင့်အထူးသလုံလောက်စွာဤသုံးသပ်ချက်ကိုဖုံးလွှမ်းမပါ) ဖွယ်ရှိသည်။
ဒီအဆင့်မှာကမတူညီတဲ့ cortical အလွှာအတွက်ဖြစ်ပေါ် (ဥပမာ, ဦး-shaped inverted နှိုင်းယှဉ် linear) innervation ၏အဘယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများရှင်းလင်း (ပုံ 2) ။ ပထမဦးဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေလုံလောက်စွာသွင်ပြင်လက္ခဏာမဟုတ်ခဲ့အရေးပါအဆက်ဖြတ်တည်ရှိစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်အသက်အရွယ်၏နမူနာတည်ရှိသည်။ ဒုတိယဖြစ်နိုင်ခြေ innervated ခံရသည့်ဒေသ၏သဘောသဘာဝ / function ကိုတည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ dopamine receptors (များ၏အခြေအနေတွင်ယခင်ကဤပြဿနာကြီးပြင်းခဲ့ကြTeicher et al ။ , 1995) နှင့် innervation ဘို့အခြားသူတွေ (နိုင်ကြောင်း et al ။ , 1998) ။ အထူးသအဆက်မပြတ်မွမ်းမံရန်လိုအပ်ကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတော်လေးအစောပိုင်း (ကြိုတင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှ) အသက်တာ၌ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း linear တိုးမှအကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆနျ့ကငျြ, ထိုကဲ့သို့သောအလေ့အထအဖြစ်အသက်တာရှည် function ကို၏သင်ယူမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများ, ကြောင်း streamlining ကနေအကျိုးကျေးဇူးတံစဉ်များကိုအတူဆက်စပ်နေပါတယ်။ တတိယဖြစ်နိုင်ခြေ innervation အဆိုပါ cortex အတွက်အလွှာ III ကိုတစ်ခုပြောင်းပြန်လှန်ဦး-ပုံသဏ္ဍာန်သရုပ်ပြနှင့်နက်နဲခြင်းနှင့်အပေါ်ယံအလွှာတစ်ဦးထက်ပိုသောတိုးတက်သောပုံစံသရုပ်ပြနှင့်တကွ, laminar အဖှဲ့အစညျးမှာအသက်အရွယ်-တိကျတဲ့ပုံစံများကိုပြသသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အတူတူယူအခ်ါများနှင့် extrinsic afferents အတွက်ထူးခြားတဲ့ဆက်သွယ်မှုပြင်းထန်စွာ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံခံ circuitry sculpting အတွက်အထောက်အကူဂိ, 2009).
တစ်ဦး1½လအရွယ်ကလေးငယ်ကိုအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် Golgi အစွန်းအထင်း (ညာ) တွင် Nissl (အလယ်တန်း, left) အောက်ပါစန်တီယာဂို Ramon y က Cajal ခြင်းဖြင့်ဒေါင်လိုက် Cross-section မှာ cortical အလွှာပြုလုပ်ခြင်းတစ်) ဆွဲပါ။ ခ) အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်း Synaptic ပြောင်းလဲမှုများပုံစံများ ...
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလျှောက်လုံး, ဦးနှောက် volume ထဲမှာခြုံငုံအမြတ်အများကြီးဖိုင်ဘာဝစော၏တခုတ်တရ myelination ကနေဆင်းသက်လာ (ဂိ et al ။ , 1994) ။ Myelination (သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မှုများ၏မြန်နှုန်းတိုးပွါး, နှင့်အနည်းဆုံးသူဌေးနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအပြုအမူ repertoire ပေါ်ပေါက်ရေးတို့အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသည်fields, 2005) ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Myelination (လိင်နှင့်ဒေသအားဖြင့်မတူပါဂိ et al ။ , 1994; Giedd et al ။ , 1999b) ။ Myelination တဖြည်းဖြည်း (Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီး, နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်ရငျ့နှင့်အတူတိုးပွါးဂိ et al ။ , 1987) နှင့်အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စခွဲခြားခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ MRI လေ့လာမှုများ (pause et al ။ , 1999) သို့မဟုတ်ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ် (DTI) ၏အသုံးပြုမှုကိုမှတဆင့် (pause et al ။ , 1999) ။ myelination အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများဘာ၏အများစုသည် Corpus callosum ၏လေ့လာမှုများ, ဦးနှောက် (ဥပမာ, (အတွင်းအကြီးဆုံး myelin ကျေးရွာအုပ်စုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Keshavan et al ။ , 2002; Teicher et al ။ , 2004)) ။ မီးခိုးရောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်မတူဘဲအဖြူရောင်အရာများ၏ rostral - caudal ပုံစံသည်လူကြီးအရွယ်သို့ Corpus callosal အရွယ်အစားကိုဆက်လက်တိုးပွားစေသည်။Giedd et al ။ , 1996a) ။ အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကို (အ posterior အပိုင်းများတွင်ဖြစ်ပေါ်pause et al ။ , 1999) ။ အခွားသောအဖြူရောင်ကိစ္စဝေစာတွေကို, အမည်ရအတွင်းပိုင်းဆေးတောင့်ခြင်းနှင့်လက်ဝဲ arcuate fasciculus, ရငျ့နှင့်အတူ myelinate မှဆက်လက်။ လူသားများတွင်ဒုတိယနှင့်တတိယဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်း frontocortical ဆက်သွယ်မှုများ၏နှောင့်နှေး myelination (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာကြောင်းတိုးမြှင်အပြုအမူစည်းမျဉ်းနှင့်အချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါLuna et al ။ , 2010; pause, 2005).
DTI အတောအတွင်းပျံ့နှံ့ (MD) နှင့်ဒဿမကိန်း anisotropy (အက်ဖ်အေ) ၏တိုင်းတာမှတဆင့်, ရေလှုပ်ရှားမှု၏ခန့်မှန်းချက်အပေါ် capitalizes ။ ပေးထားသော voxel အတွင်းမှာပဲအက်ဖ်အေအစီအမံ0(ဿုံ isotropic ပျံ့နှံ့) မှ 1 (ဿုံ anisotropic ပျံ့နှံ့) မှကွဲပြားနှင့်ဖိုက်ဘာအချင်းများနှင့်သိပ်သည်းမှု, ကွက်တိဝင်နှင့် myelination ၏ဒီဂရီ (ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်Basser နှင့် Pierpaoli, 1996) ။ အက်ဖ်အေရေပျံ့နှံ့၏ directionality ၏ဒီဂရီကို examine ။ ထိုကဲ့သို့သောကျေးရွာအုပ်စုတလျှောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောအရာကိုအဖြစ်တစ်ခုတည်းဦးတည်ချက်အတွက်ရေလှုပ်ရှားမှု, မြင့်မားအက်ဖ်အေတန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။ ဘယ်လို MD နဲ့ဦးနှောက်ဒေသများအမျိုးမျိုးအတွက်အသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးအက်ဖ်အေပြောင်းလဲမှု (5-30 နှစ်) ၏ကျယ်ပြန်စရိုက်လက္ခဏာတွေ (Lebel et al အားဖြင့်အစီရင်ခံစာများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်Lebel et al ။ , 2008) နှင့် Qiu et al (Qiu et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ Corpus callosum ၏ splenium အသက် 8 နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီ၎င်း၏အပြည့်အဝဆုံးရှုံးမှု (~ 15%) ရောက်ရှိသော်လည်းအဆိုပါ Liebel et al စက္ကူအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာဒေသ, MD ၏အရှိဆုံးလေးနက်တဲ့အရှုံးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း caudate နျူကလိယကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အက်ဖ်အေတိုင်းတာတစ်ဦးချင်းစီ axon နှင့်၎င်းတို့၏ထုပ်ပိုး "သိပ်သည်းဆ" ၏ဥပမာဆွေမျိုး alignment ကို (myelination ထက်ပိုမိုထင်ဟပ်နှင့်ဖိုက်ဘာ၏သဘောသဘာဝအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု၏ခန့်မှန်းချက်များပါဝင်သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ tracts; pause, 2010) ။ ထို့ကြောင့် FA အတိုင်းအတာများအပေါ် အခြေခံ၍ myelination ပြောင်းလဲခြင်းသည် myelin နှင့် axon အချင်းတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ `g 'အချိုး (axon အချင်း: axon အချင်း + myelin sheath အထူ) axon အချင်းနှင့် fiber အချင်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက်တွက်ချက်ရန်တီထွင်ထားသည်။ axon အချင်းနှင့် myelin အထူနှစ်မျိုးလုံးသည် conduction အလျင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သော်လည်းအပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက်တူညီသောအတိုင်းအတာအထိမတိုးသောကြောင့် `g 'အချိုးသည်အဖြူရောင်နှင့်စီးကူးမှုတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုပိုမိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။pause နှင့် Toro, 2009) ။ axon အချင်းရန် myelination နှင့်၎င်း၏ဆက်ဆံရေး၏ဒီဂရီခန့်မှန်းအီလက်ထရွန် microscopy လိုအပ်သည်။ ကြွက်များတွင် Non-တဖက်သတ် stereological အတိုင်းအတာတစ်ဒေသဆိုင်ရာ-မှီခိုထုံးစံ၌ glial ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုအပြောင်းအလဲများကဖော်ပြသည်။ Glia ဆဲလ်အရေအတွက်က (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား ventromedial PFC အတွက်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် dorsal PFC အတွက်ရငျ့နှင့်အတူနီးပါး 40% တိုးပွါးMarkham et al ။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့် DTI ပြောင်းလဲမှုများ glia နှင့် axon အချင်းအပြောင်းအလဲများနှစ်ဦးစလုံးကိုထင်ဟပ်။
myelination ပြောင်းလဲမှုများအဆုံးအဖြတ်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမျိုးဗီဇစကားရပ်ဆနျးစစျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးသန့်စင်ပြီးခန္ဓာဗေဒတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုက်ညီ, myelination နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မျိုးဗီဇလည်းလူသားတွေအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစကားရပ်တိုးမြှင့် (Harris က et al ။ , 2009) ။ MBP (myelin အခြေခံပရိုတိန်း), MOG (myelin oligodendrocyte glycoprotein), နှင့် MAG (myelin ဆက်စပ် glycoprotein) ရငျ့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စကားရပ်ကိုတိုးမြှင်အပါအဝင်ဥပမာအားဖြင့်, မျိုးဗီဇ။ MBP နှင့် MOG myelin အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနဲ့ဆက်စပ်နေတာနေစဉ်, MAG (myelination ၏ဒီဂရီနှင့်အတူ axon caliber (လှုပ်ရှားမှု) နားဆက်မှီရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ယဉ် et al ။ , 1998) ။ အတူတကွပုံမှန်အားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စရငျ့၏ inverted ဦး-ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူခြားနားတဲ့တိုးတက်သော, linear ဖက်ရှင်အတွက်အဖြူကိစ္စသိပ်သည်းဆတိုးမြှင်ယူ။
myelination ၏ 3.2.2 လိင်မှီခို
လိင်ကွဲပြားမှု myelination အတွက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများ (ယောက်ျားအတွက်လူကြီးသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သင်တန်းကိုဖြတ်ပြီးမျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသ myelination အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးသရုပ်ပြပေမယ့်မရအမျိုးသမီးBlanton et al ။ , 2004; Leussis နှင့် Andersen က, 2008; pause, 2010) ။ ယင်းအစား myelination အမျိုးသမီးအတွက်အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လူ့ hippocampal myelination အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအထီးထက်အမျိုးသမီးအတွက် myelination ၏ 5% သာ. ကြီးမြတ်ဒီဂရီပျမ်းမျှ (အတူအသက် 37 နှစ်ကြာပေါ်ထွက်လာဂိ et al ။ , 1994) ။ အလားတူလိင်ကွဲပြားမှုမျိုးစိတ် (ဥပမာလူသားများ, ကြွက် (Kodama, 2008)) ကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီး (ပံ့ပိုးနည်းပါးလာ glia ဆဲလ်များပေမယ့်လူကြီးအားဖြင့်, အ Corpus callosum အတွက် myelination, ယောက်ျားအတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည်Nunez နှင့် Juraska, 1998; ကင်မ် et al 1997) ။ အလားတူပဲ, ကြွက် PFC (ထိုဒေသအတွက် volume ထဲမှာလိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အကူပြုရသောလူကြီးများကအထီးထက်အမျိုးသမီးအတွက် 15% လျော့နည်း glia ဆဲလ်တွေရှိပါတယ်Markham et al ။ , 2007).
DTI ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအက်ဖ်အေနှင့် MD ၏ဘယ်နေရာတွေမှာသို့ခွဲခြားသောအခါ, ကွဲပြားခြားနားသောပရိုဖိုင်း (လိင်ကိုဖြတ်ပြီးနှင့်ဒေသအနှံ့, အစီအမံများအကြားတည်ရှိနေAsato et al ။ , 2010) ။ arcuate fasciculus (Wernicke နှင့်caရိယာနှင့် Broca ၏connectရိယာကိုဆက်သွယ်ပေးသော) ၏ fiber fiber သည် tractor-occipital fasciculus (sensorimotor နှင့် frontal ဒေသများကိုဆက်သွယ်ပေးသော) သည်မိန်းကလေးများတွင်အက်ဖ်အေတိုးပွားလာကြောင်းပြသသော်လည်း၊ ; MD တွင်လိင်ကွဲပြားမှုမရှိပါ။Ashtari et al ။ , 2007; Schmithorst et al ။ , 2008) ။ ဤအပြောင်းအလဲများ (အိုင်ကျူနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်ယောက်ျားပေါင်းကျော်ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးအတွက်နှုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့ခြီးမွှောကျခဲ့ကြAshtari et al ။ , 2007; Schmithorst et al ။ , 2005) ။ MD (လျော့နည်းသွားသော်လည်းမတူဘဲအခြားဝေစာတွေကို, အက်ဖ်အေအတွက်မျှော်မှန်းထားသည်အသက်အရွယ်-related တိုးပြသရန်ပျက်ကွက်Eluvathingal et al ။ , 2007) ။ radial ပျံ့ပြောင်းလဲမှုများမရှိခြင်းအတွက်အက်ဖ်အေအနေနဲ့တိုး (demyelination တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအညွှန်းကိန်း) ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းဆောင်ရွက်ချက်များနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကြီးမြတ်သော axon ဖိုင်ဘာအဖွဲ့အစည်းကိုလျှော့ချ tortuousity ကနေအကူးအပြောင်း (သို့မဟုတ် straighter အမျှင်) ညွှန်ပြစေခြင်းငှါ (Ashtari et al ။ , 2007) ။ ပိုမိုထိရောက်သောအပြောင်းအလဲနဲ့ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေရဲ့ခန့်မှန်းရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
testosterone ဟော်မုန်းနည်းတာကယောက်ျားလေးတွေမှာ g 'ပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်စပ်တယ်။Perrin et al ။ , 2008) ။ `ဆအချိုး 'သည်လူ့အထီးတွင်တိုးပွားသော်လည်းအမျိုးသမီးများတွင်မူမပြောင်းလဲပါ (pause နှင့် Toro, 2009) ။ axon caliber ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့် DTI အတွက်အမျိုးသမီးအပြောင်းအလဲများကိုပိုကောင်း myelination ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါသော်လည်း, ယောက်ျားအတွက် DTI တစ်ခုတိုးလာကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါ (Perrin et al ။ , 2009) အခြေခံလေ့လာမှုများအမျိုးသမီး Corpus callosum pubertal ဟော်မုန်းမှအထိခိုက်မခံကြောင်းပြသလျက်, ကြွက်များတွင်အသက် 20 ရက်ပေါင်းမှာ ovariectomy (ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ myelinated axon ၏နံပါတ်လျော့ကျYates နှင့် Juraska, 2008); ဒီလေ့လာမှုမှာ axon ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကဤပြောင်းလဲ myelin နှင့်မဆဲလ်၏အရှုံးကြောင့်ခဲ့ကြသည်အကြံပြုခြင်း, မထိခိုက်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်လိင်ကွဲပြားမှုဆဲလ်အထီးထက်ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးအတွက်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သေဆုံးဘယ်မှာ oligodendrocytes ၏ရှင်သန်မှုအချိန်, (အတွင်းတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်Cerghet et al ။ , 2006) ။ သည်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေသည်အခြား gonadal ဟော်မုန်း (ဥပမာ, အဓိကချို့ယွင်း) modulate ကြောင့်အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှု, စိတ်ဖိစီးမှု-related ဟော်မုန်း, ဒါမှမဟုတ်အလှည့်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု myelination (တှငျဆှေးနှေးပင်ကြီးထွားအချက်များပါဝင်သည် Yates နှင့် Juraska, 2008) ။ အပိုဆောင်းသုတေသနအီစထိုဂျင် myelination modulates ဘယ်လောက်အတွင်းပျောက်ဆုံး mechanistic ကွာဟချက်အတွက်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့သာ (synaptogenesis နှင့်တံစဉ်များကိုဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူပုံဖော်ဖို့ myelinating လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဦးနှောက် function ကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုနားလည်ရန်စတင်နေကြသည်pause et al ။ , 2008) ။ Myelin ပေးထားသောဒေသမှအမျိုးမျိုးသောအကွာအဝေးကနေမတူကွဲပြားသွင်းအားစုများ၏မြန်နှုန်းညှိနှိုင်းရေးအတွက်ပိုပြီးအရေးကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, ဒါပေမယ့်။ synchronous အချက်ပြ (ပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အဘို့အထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည်fields, 2005), စိတ်ရောဂါတစ်ခုအရေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ myelination ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ။
4.0 ။ functional အပြောင်းအလဲများကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအကူးအပြောင်းဖို့ကလေးဘဝကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံများကိုပြသလိမ့်မည်။ အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကဦးနှောက်အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့အကြားနှင့်အဆောက်အဦများအတွင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်၎င်း၏ဖြစ်ပေါ်နေသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အရင်းအမြစ်များ (ဥပမာ, ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ဘယ်လိုဦးနှောက်ဒေသများ differential ပေးထားသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတုန့်ပြန်သက်ဝင်စေလည်း၎င်းတို့သည် function အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည်ပုံကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်, MRI ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် "functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု" နှစ်ခုဒေသများအကြားတည်ရှိနေသောဆက်စပ်မှုဆက်ဆံရေးကိုရည်ညွှန်းသည်။
4.1 ။ စွမ်းအင်အသုံးချမှု
အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ morphological အပြောင်းအလဲများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဦးနှောက်ကိုအတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ရှေ့ပြေးနေကြသည်။ cross-section ဒီဇိုင်းအတွက်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု map မှဂလူးကို့စ၏အပေပုံရိပ်အသုံးပြုသောအလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများအပေါ်မူရင်းလေ့လာမှုများ (Chugani, 1998; Feinberg, 1988) ။ လူသားတွေအတွက်ဂလူးကို့စအသုံးချ (အသက်၏နှစ်နှစ်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိChugani et al ။ , 1987) ထိုအခါမူကားအသက် 4-5 နှစ်ပေါင်းအားဖြင့် ~ 10% အားဖြင့် pruning မတိုင်မီအသက် 50 နှစ်ပေါင်းသည်အထိအသက် 16-18 နှစ်ပေါင်းမှာမြင့်တက်နှင့်ဤကုန်းပြင်မြင့်ကိုထိန်းသိမ်းထား (Chugani, 1998) ။ သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုဤအချိန်တွင်မသိရပေမယ့်, ဥပမာ, မျိုးဗီဇ acyl coA dehydrogenase (ACADSB) ဇီဝြဖစ် glucose နှင့်ဆက်စပ်သောဗီဇ, (, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့်မားအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်Harris က et al ။ , 2009).
, phosphocreatine (PCR; စွမ်းအင်ဒိုင်းနမစ်); ထိုကဲ့သို့သော n-acetylaspartate (အာရုံခံခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတစ်အမှတ်အသား NAA) အဖြစ်ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်ဆနျးစစျကွောငျးကိုဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အခြားအမှတ်အသားများ, နှင့် (ထုတ်လုပ်သူ sPME နှင့် sPDE နှင့်အတူ) အမြှေးပါး phospholipids ဇီဝြဖစ်သံလိုက်နှင့်အတူလေ့လာခဲ့ကြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ non-ထိုးဖောက်အညွှန်းကိန်းများကိုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု spectroscopic ပုံရိပ် (MRSI) ။ ဤအအမှတ်အသားများအတွက်အပြောင်းအလဲများ (ဎ =6ဘာသာရပ်များအတွက်အဟောင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း 9.5-9.5, 12-12 နှင့် 18-106 နှစ်ပေါင်းဖြတ်ပြီးဦးနှောက် axial ချပ်ထဲမှာသွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်စတိန်း et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ 6-9.5 တစ်နှစ်ကြားရှိမှ 12-18 တစ်နှစ်ကြားရှိအကြားနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိသိသိသာသာအာရုံခံအပြောင်းအလဲများကိုအကြံပြုထားတဲ့ NAA, မခြားနားချက်ကိုပြသ။ ဤသည်လေ့လာရေး, Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာတစ်ရှူး (ဥပမာထဲမှာတိုက်ရိုက်တိုင်းတာခြင်းကဆုံးဖြတ်ကောင်းစွာ-စရိုက်လက္ခဏာတွေအာရုံခံအရှုံးတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည် Huttenlocher, 1979) ။ သို့သော် NAA myelin ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်း olidgodendrocytes များအတွက် acetate ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီး NAA မကွန်ပြောင်းလဲမှုအာရုံခံအရှုံးနှင့်တိုးမြှင့် myelination အကြားချိန်ခွင်လျှာကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ PCR ငယ်အသက်အရွယ်အုပ်စုလျှော့ချပေမယ့်ရာခိုင်နှုန်းကမီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်အမြှေးပါး phospholipids လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ထားတဲ့ sPME / sPDE အချိုးအတွက်မြင့်တက်မြင့်ခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ PCR နှင့်ရာခိုင်နှုန်းကိုမီးခိုးရောင်ကိစ္စအလွန်အမင်းအသက်ဆက်နွယ်နေကြောင်း, ဒါပေမယ့် NAA, sPME, sPDE နှင့် sPME / sPDE မဟုတ်ကြခဲ့ကြသည်။ အချို့သောအလားအလာအပြောင်းအလဲများကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်လွဲချော်ခဲ့ကြပေမည်နေချိန်မှာအဲဒီဒေတာ MRSI အဆုံးအဖြတ်အသက်အရွယ်-related ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများကိုမပြပါဘူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
MRI နဲ့သတ်မှတ်အဖြစ် 4.2 Functional ဆက်သွယ်မှု
functional ဆက်သွယ်မှုပြည်နယ်အနားယူစဉ်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ် (တစ်ဦး fMRI တာဝန်စဉ်အတွင်း activation ဒေသများတွင်အကြားယာယီကြားဆက်ဆံရေးကိုပြသရန်အသုံးပြုသည်အခြားချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတသော et al ။ , 2008; Supekar et al ။ , 2009; Thomason et al ။ , 2009; Zuo et al ။ , 2010) ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု၏ Maps ကိုလည်း connectomes အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် (Biswal et al ။ , 2010), ဒီတောသားမကြာသေးမီ application ကိုကိုယ်စားပြု fMRI မှ applications များနှင့်အတူ (Lichtman နှင့်စိတ်ကောင်းသော, 2008) ။ အချို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများကင်းမဲ့သည့်နေရာများတွင် `အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှု 'ရှိကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကကန့်သတ်ထားသည်။ပျားရည် et al ။ , 2009; Koch et al ။ , 2002) ။ အနားယူသည့်ပြည်နယ် fMRI သည်ကြီးမားသောလွှဲခွင်အလိုအလျောက်နိမ့်ကြိမ်နှုန်း (<0.1 Hz) အတက်အကျပေါ်ပေါက်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေခံသည် (Biswal et al ။ , 2010) ။ အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုကိုနားလည်ရန်ချဉ်းကပ်မှုများတွင်အမျိုးအနွယ်အခြေပြု (အစမှတ်တစ်ခုအားစတင်သတ်မှတ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်နေရာ)၊ လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (ICA) နှင့်ကြိမ်နှုန်း - ဒိုမိန်းဆန်းစစ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော ဦး နှောက်စနစ်များ၏လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးဆက်သွယ်မှုများ (ဥပမာ - အသားအရောင်ခွဲခြားမှု) နှင့်တိုးမြှင့်သောအကွာအဝေးဆက်သွယ်မှုများ (ဥပမာ - ပေါင်းစည်းမှု) တို့ပါဝင်သည်။တရားမျှတသော et al ။ , 2007; Stevens et al ။ , 2009) ။ တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုဖြန့်ဝေကွန်ယက်ဒေသခံတစ်ဦးထံမှဖှံ့ဖွိုးတိုးရရှိသောကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ (အသေးစိတ်အပြန်အလှန်ဖြစ်လာအဖြစ်တရားမျှတသော et al ။ , 2009) ။ ဤသည် interconnectivity ကို synchronous သည်မဟုတ်, အစားတစ်ဦးချင်းစီဒေသများ (ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဖြစ်လာSupekar et al ။ , 2010).
fMRI အနားယူ၏ functional ဆက်သွယ်မှုလေ့လာမှုများပြုလုပ်တက်ကြွစွာသတင်းအချက်အလက် processing မဟုတ်အခါတစ်ဦး "က default ကွန်ယက်ကို" ဦးနှောက်ထဲမှာရှိကွောငျးဖျောပွပါ။ ကို default ကွန်ရက် posterior cingulate cortex, mPFC, medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, နှင့် angular gyrus ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တစ်ဦးချင်းစီဟာတိတ်ဆိတ်, ကျိန်းဝပ်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအခါဤအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုနိုင်ပါတယ်, အနိမ့်အကြိမ်ရေလှို (0.1 Hz) ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအချင်းချင်းဒေသတွင်းပိုပြီးဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ (တရားမျှတသော et al ။ , 2008ကို default ကွန်ယက်ကိုဒီအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်အတွင်း), အသက် 9-12 နှစ်အကြား (ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်သဖြင့်, Broyd et al ။ , 2009) ။ ကို default ကွန်ရက်အတွင်း၌တစ်ဦးလျော့ချရေး schizophrenia နဲ့အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သော်လည်းအဆိုပါ default အကွန်ရက်တီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှတွေးဆခဲ့သည်။
အခြားအအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ယက်များ, သို့သော်, ဆက်ဆက်ဦးနှောက်ထဲမှာတည်ရှိနေ။ ရောထွေးလိင်အုပ်စုများအတွက်နုပျိုလူကြီးများ (12.5 ± 0.51 [SD က] အနှစ်) အားလူငယ်တစ်မြီးကောင်ပေါက် ([SD က] နှစ်ပေါင်း 22.2 ±အသက်အရွယ် 1.67 ဆိုလို) နှိုင်းယှဉ်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ 13 အဓိကအလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ရက်များ (ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြJolles et al ။ , 2010) ။ ဤအကွန်ရက်ရှစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း cortical ဒေသများအကြားပိုမိုလှုပ်ရှားမှုပြနှစ်ခုလှုပ်ရှားမှုမရှိခြားနားချက်ပြပြီး, သုံးအခြေခံအမြင်အာရုံသို့မဟုတ် sensorimotor လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဆက်စပ် (ဆိုလိုသည်မှာ sensorimotor, အမြင်အာရုံစနစ်, နှင့် ventral စီးကွန်ရက်များ) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလျော့နည်းလှုပ်ရှားမှုပြသ ငယ်ရွယ်လူကြီးထက်။ ဤအကွန်ရက် identification ယခုသူတို့အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကိုသရုပ်ပြအဘယ်ကြောင့်သို့အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
5 ။ ဆားကစ်၏ functional ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအပြုအမူအတွက်သိသာထင်ရှားသောဆိုင်းဦးနှောက်အတွင်းအသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများမှချည်ထားသောနေကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့်သုံးသပ်ချက်များ (တခြားနေရာတွေ့ရှိလှံ, 2000), ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲမှုများသည်ဤအပြုအမူအချို့ကိုရှင်းပြပုံကိုတိကျတဲ့၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုတင်ပြ။ ဦးနှောက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏ orchestration အတွင်းစီဒေသရငျ့ (Tau နှင့် Peterson, 2010) ၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ timecourse ရှိပါတယ်။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းယေဘုယျအားဖြင့် cortical ဒေသများ, အကြာတွင် subcortical ဒေသများထက်ရင့်ကျက်။ အာရုံခံကွန်ယက်ကိုဖွဲ့စည်း၏တစ်ဦးချင်းစီ node များအတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှောင့်နှေးသို့မဟုတ် ပတျသကျ. ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများ (၏လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များတစ်ဒိုမီနိုကဲ့သို့ကွင်းဆက်တစ်ခုစတင်ရန်များပါတယ်Ernst နှင့် Fudge, 2009; Haber နှင့် Rauch, 2010) ။ ဖြစ်ရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောကက်စကိတ်ဆက်ရေးအတိုင်းဤရှုထောင့်ကနေ longitudinal လေ့လာမှုများ (ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏ sequence ကိုအဆုံးအဖြတ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်Gogtay et al ။ , 2006; Sowell et al ။ , 2004) ။ ဥပမာအားဖြင့်, Shaw နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (Shaw et al ။ , 2007) cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးသူတို့၏ရွယ်တူချင်းရန် ADHD ဆွေမျိုးနှင့်အတူသားသမီးများအတွက်ကျန်ရစ်ပေမယ့်လူကြီးများကတက်ဖမ်းသည်ဟုသက်သေပြပြီးပါပြီ။ ဆနျ့ကငျြ, schizophrenia များ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစတင်ခြင်းပုံမှန်ကလေးများ (အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာသည်ထက်အစောပိုင်းကလမ်းနည်းပါးတံစဉ်များကိုအတူဆက်စပ်နေသည်Rapoport et al ။ , 1999) ။ ဤကဲ့သို့သောလေ့လာရေးအဆိုပါရောဂါ၏သင်တန်းခြေရာခံဘို့အရေးကြီးလှသည်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်အပြင်ဘက်လွှမ်းမိုးမှုမှဖြစ်မည်အကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပြတင်းပေါက်မီးမောင်းထိုးပြ။
အဆိုပါ reward- ၏ကျယ်ပြန် domains များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်း psychopathology ၏ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ-ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုအရေအတွက်ကပေးသော, (ကော်လံကလွဲနေတယ် go သို့မဟုတ်အစောပိုင်းကအသက်တာ၌ misguided နှင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအားဖြင့် unmasked ခဲ့ကြသည်ဖြစ်စေကြောင်း process လုပ်တယ်Andersen က, 2003; Andersen ကနှင့် Teicher, 2008; Weinberger, 1987; Laviola et al ။ , 2003) ဒီကာလအတွင်းထင်ရှားစွာပြပါလိမ့်မယ်။ အထိခိုက်မခံကာလကို delineating နှင့်ကြိုးကိုင်ခြင်း၏အရေးပါမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုနားလည်တည်ရှိသည်။ ထို့ပြင်များစွာသောမမှန်ကော်လံကလွဲနေတယ်သွားပြီ neurodevelopmental လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးအခြေခံရှိသည်။ ဒုက္ခစောစောထိတွေ့မှုမမှန်တဲ့အရေအတွက်မြင့်မားအန္တရာယ်အချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရောဂါလေ့လာမှုများ (အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုအတွက်ဒုက္ခရလဒ်များကိုမှထိတွေ့မှုပြသကြAnda et al ။ , 2006; Anda et al ။ , 2002; ချပ်မန်း et al ။ , 2004), နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (Andersen ကနှင့် Teicher, 2009), နှင့်အစောပိုင်းအလွဲသုံးစားမှု (များ၏အသုံးအများဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူ sequelae အဖြစ်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူသတ်သေ,Putnam, 2003; Zisook et al ။ , 2007).
5.1 ။ အကျိုးသက်ရောက်စေဆားကစ်၏ functional ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ဦးနှောက်အတွက်ဆားကစ်နှင့်စနစ်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအများအပြားအတူတကွထားရန်အပိုငျးပိုငျးရွေ့လျားအတူရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးမှဆက်စပ်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆားကစ်ချဉ်းကပ်ဖို့လမ်းအဖြစ်ကျနော်တို့ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းဆုချအောက်ပါ Overview သည်။ ဤရွေ့ကားချဉ်းကပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအမူအကျင့်များနှင့် pharmacological အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆနျးစစျကွောငျးမရေမတွက်နိုင်အောင်များနှင့်အရေးကြီးသောလေ့လာမှုများမပါဝင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အမြစ်မှာ neuroanatomical ဆက်ဆံရေးရှိသည်သောလေ့လာမှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည်။
လူ့အပြုအမူနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အများကြီး (ကြိုးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သူတို့ဖြစ်ပေါ်ရသောအတွက်အခင်းအကျင်းများအကြားယခင်က-ဝယ်ယူအသင်းအဖွဲ့များထံမှပေါ်ပေါက်Cardinal et al ။ , 2002) ။ ဤရွေ့ကားအစွမ်းထက်, (အသင်းအဖွဲ့များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်အပြုအမူမောင်းသင်ယူCardinal et al ။ , 2002) နှင့် Pavlovian အေးစက်ယန္တရားများမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ် (Rosenkranz et al ။ , 2003) ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် (အ basolateral amygdala (BLA) အတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်နှင့် Rosenkranz, 2002), အရာတခုအစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိရလဒ်ကို၏ဖြစ်ပျက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုများအကြားအစွမ်းထက်အသင်းအဖွဲ့များဖြစ်ပေါ်လာသောနှင့် (ထို BLA အတွင်း "ကိုအကျိုးသက်ရောက်" ကိုထုတ်လုပ်Cardinal et al ။ , 2002; Laviolette et al ။ , 2005; Schoenbaum, 2004; et al ။ , 2003 ကိုကြည့်ပါ) ။ သို့သော်ပေးထားသောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် (ကရှေးခယျြမှုမှပြောပြတယ်အဖြစ်စိတ်ဓါတ်များ, စိတျပိုငျးဆိုငျရာအဓိပ်ပာယျ, ဒါမှမဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌တိကျသောနှင့်သင့်လျော်သောဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်pause et al ။ , 1996) ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို (PFC ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်Cardinal et al ။ , 2003; Rebec နဲ့ Sun, 2005; Schoenbaum, 2004; Ventura et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါ PFC အတွက် Noradrenergic နှင့် dopaminergic receptors shared သွင်းအားစုနှင့်အတူအာရုံခံအကြားကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှု, အပြုအမူနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းဖျန်ဖြေ (Arnsten, 2009) ။ အဆိုပါ mPFC အတွင်းမှာပဲအချက်အလက်များ၏ salience ရွေးချယ်ထားသောအာရုံကိုထိန်းညှိရန်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် BLA မှသတင်းအချက်အလက် (glutamatergic စီမံချက်များအားဖြင့် mPFC မှလက်ဆင့်ကမ်းနေသည်Bechara et al ။ , 1999; Laviolette et al ။ , 2005; မက်ဒေါ်နယ်နဲ့ Pearson, 1989), က salience များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌သည်အဘယ်မှာရှိ (Schultz, 1998) နှင့်အနာဂတ်ရလဒ်ခန့်မှန်းဘို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအမှားအယွင်းများ (Falkenstein et al ။ , 2000; စျေး, 1999) ။ ရလဒ်အဖြစ်တစ်ခုဆန္ဒရှိရလဒ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု (အနေနဲ့သင့်လျော်စွာသပ္ပါယ်ထုံးစံ၌တုန့်ပြန်နိုင်ပါတယ်Pezze et al ။ , 2003) ။ ဒီ function ကို (mPFC အတွက် dopaminergic အချက်ပြမှုများအားဖြင့်ဖျော်ဖြေနေသည်ဂျက်ဆင်နှင့် Moghaddam, 2004), စိတျပိုငျးဆိုငျရာသတငျးအခကျြမြားနှငျ့ salience နှင့်အသစ်အဆန်း၏နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ဝှက်ထားတဲ့ (Cardinal et al ။ , 2002; Milad နှင့် Quirk, 2002) ဂိုးညွှန်ကြားထား, လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်။ အဆိုပါ mPFC (တိုက်ရိုက်နျူကလိယ accumbens မှဤအချက်အလက်ပေးပို့goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; Voorn et al ။ , 2004), သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် amygdala ကနေတစ်ဆင့်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါ mPFC အတွင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သည်နျူကလိယ accumbens အတွက်လှုံ့ဆော်အပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုး။
အဆိုပါ amygdala နှင့် PFC အကြားနုအပြောင်းအလဲနဲ့ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်အထိအကျိုးသက်ရောက်စေနာမကျန်း၏နှောင့်နှေးပေါ်ပေါက်ရေးအခြေခံမှအဆိုပြုပြီးပါပြီErnst et al ။ , 2006) ။ Ernst နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (နေဖြင့်အဆိုပြုထားသည့် triadic မော်ဒယ်အတွင်းErnst et al ။ , 2006), အ amygdala နှင့်အတူဆက်စပ်ရှောင်ရှားခြင်းစနစ်ကတစ်ဦးနု PFC အားဖြင့်အတော်လေးအမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါအပြုအမူမောင်း။ ဒီ model အရ, နျူကလိယ accumbens (အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိအေးစက်အကြား link ကို၏ခွန်အားညှိHorvitz, 2002) ။ ဒါကသီအိုရီတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမူဘောင်အတွင်းစိတ်ကျရောဂါ၏ neurobiology အကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းသောရှားပါးအနည်းငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သီအိုရီကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် (ဖြစ်ရပ်မဟုတ်သောအရာ, ထွန်းသစ်စ cortical င့်ကျက်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏စိတ်ကျရောဂါထဲကကြီးထွားမယ်လို့ဆိုလိုAndersen ကနှင့် Teicher, 2004; 2008).
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက (စိတ်ကျရောဂါမှအားနည်းချက်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ၎င်းဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြAndersen ကနှင့် Teicher, 2008) ။ အတိုချုပ်, သားသမီး (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက် amygdala အတွက်လူကြီးများထက် ပို. လှုပ်ရှားမှုများKillgore et al ။ , 2001), နောက်ထပ်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အတူကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုဆိုးရွားသော (Beesdo et al ။ , 2009) ။ သို့သော်နျူကလိယကို (amygala မှအစားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ် accumbensErnst et al ။ , 2005) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက် PFC ၏န်ထမ်းခေါ်ယူမှု (လူကြီးသည်အထိဖြစ်ပေါ်ပါဘူးKillgore et al ။ , 2001) ။ Preclinically, ဤ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း PFC innervation မှ BLA နှစ်ခုစလုံးဆက်လက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပြသသောစမ်းသပ်ချက် tracing ဝစောနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Cunningham et al ။ , 2002), ဒါပေမဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း BLA သွင်းအားစုမှ PFC ၏ innervation အတွက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကတစ်ဦးအထွတ်အထိပ် (Cressman et al ။ , 2010) ။ အတူတူ, တိုးမြှင့်ခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှုဟာစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေနှောင့်နှေး (ဆယ်ကျော်သက်) ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှုကျော်ဖွံ့ဖြိုး (သို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပျက်ကွက်) ကိုအကျိုးသက်ရောက်အတိုင်းဤရင့်ကျက်ပြည်နယ် epitomizes ကြောင့်စိတ်ခံစားမှု lability များအတွက်အခြေခံများကိုဖြစ်နိုင်သည်။
5.2 ။ ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ functional ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ခေတ်မီ MRI နှင့် electrophysiologic လေ့လာမှုများဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တိုကျရိုကျ cortex အတွင်း subdivisions ၏ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ mPFC (Broadman ဒေသများ [BA] 10 / 12 / 32 နှင့် anterior cingulate cortex အပါအဝင်; BA ဘွဲ့ 24) ကိုဆုလာဘ်၏ရလဒ်ကိုမှတုံ့ပြန်: လက်ခံရရှိမဟုတ်သည့်အခါတစ်ဦးမျှော်လင့်ဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ထားသည်လျှင် activated ဖြစ်ပါတယ် (Knutson et al ။ , 2003; Schulz et al ။ , 2004) ။ ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းတိုကျရိုကျ cortex (OFC) မျှော်မှန်းရလဒ်များ encodes နှင့်အလားအလာဆုလာဘ်အပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ခွန်အားနိုးတနျဖိုးခန့်မှန်းထားသည်။ အဆိုပါ OFC မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်နှောင့်နှေးအားဖြည့် (အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍDalley et al ။ , 2004), အာရုံခံ limbic, တိုကျရိုကျနှင့် subcortical ဒေသများတွင်၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဝေမျှယခင်ဆုလာဘ်-ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များဖိနှိပ်နေစဉ် OFC function (value ကိုဆုချဖို့ရွေးချယ်တုံ့ပြန် medial ဝေမျှအတူကွဲပြားElliott သည် et al ။ , 2000; Elliott သည် et al ။ , 2003; လန်ဒန် et al ။ , 2000).
အဆိုပါ accumbens (ventral striatal ဒေသ) ကို (saliency မှတုံ့ပြန်Ernst et al ။ , 2004), valence (အစာစားချင်စိတ်သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိ) (Jensen et al ။ , 2003) နှင့်အကျိုးကို၏ကြိုတင်ခန့်မှန်း (ခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ်ဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်မြှင့်လုပ်ဆောင် (Bern et al ။ , 2001; Elliott သည် et al ။ , 2000)) ဒါပေမယ့်မမော်တာအစိတ်အပိုင်း (Zink et al ။ , 2004) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွင်း accumbens (ဆုချဖို့ OFC ထက် သာ. ကြီးမြတ်တုံ့ပြန်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာ (ထိုဆယ်ကျော်သက်ရွယ် accumbens drives တွေကိုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းအကြံပြုသွပ်ရည်စိမ်, 2010).
သို့သော် cortical နှင့် subcortical စနစ်များလှုံ့ဆော်မှုဆုချတုံ့ပြန်ဘယ်လိုအထောက်အထား cortex ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းမှုတစ်ခုပင်ပိုကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါကွန်ရက်များရင့်ကျက်နှင့် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဲ့သို့ဖြစ်လာအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတံစဉ်များကိုတဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကြောင်းဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အကူးအပြောင်းမှာပြခြင်းနှင့်အလားအလာ cortical ကွန်ရက် Re-အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြBrenhouse et al ။ , 2008; သင်္ဘောသား et al ။ , 2007) ။ လက်တွေ့ fMRI လေ့လာမှုများ (ventral striatum နှင့် mPFC နှစ်ဦးစလုံးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလှုံ့ဆော်မှုဆုချမှကိုသက်ဝင်ကြောင်းအကြံပြုBjork et al ။ , 2004) ။ ဒီအကူးအပြောင်းမတိုင်မီကဆုလာဘ်-related BOLD တာဝန်များကို (အရွယ်ရောက်သူထက်ကလေးငယ်များအတွက်တိုကျရိုကျဒေသများတွင်ပိုမိုပျံ့နှင့်လျော့နည်းပြင်းထန်သော activation ထုတ်လုပ်ရန်Durston et al ။ , 2003) ။ သို့သော်ကလေးငယ်များ (အ ventral striatum (accumbens) တွင် သာ. ကြီးမြတ် activation ကိုပြသErnst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006) ။ ကျွန်တော်နည်းနည်း mechanistically လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအကြောင်းကိုသိကြသည့်အတိုင်း, ကျွန်တော်တစ်ဦး သာ. ကြီးမြတ်နားလည် preclinical သုတေသနအပေါ်သို့ဆွဲပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ mPFC ၏ရငျ့ (အများဆုံးကိုအခြားဦးနှောက်ဒေသများမှဆွေမျိုးနှောင့်နှေးနေသည်Andersen က et al ။ , 2000; Huttenlocher, 1979) နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာလူကြီးမှအထွတ်အထိပ် Synaptic သိပ်သည်းဆရောက်ရှိ (ဂိ et al ။ , 2000) ။ dopamine အာရုံခံ၏တိုးလာပေါက် (ဂိ et al ။ , 1996; Kalsbeek et al ။ , 1988; Verney et al ။ , 1982), အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ (Andersen က et al ။ , 2000; Leslie et al ။ , 1991) နှင့်ဒုတိယတမန်စနစ်ကလှုပ်ရှားမှု (Andersen က, 2002) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း mPFC တစ်ခုတိုးမြှင် dopaminergic drive ကိုအတွက် culminate ။ မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်လည်းအပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ရသော mPFC, (ထဲမှာ Non-အစာရှောင်ခြင်း spiking ဆဲလ် D1 activation အတွက်အသက်အရွယ်-related တိုးသရုပ်ပြTseng et al ။ , 2006), ဤတူညီသောအသက်အရွယ်မှာ VTA dopaminergic အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းအတွက်အထွတ်အထိပ် (McCutcheon နှင့် Marinelli, 2009) ။ အဆိုပါ accumbens မှ glutamatergic ရလဒ်အပေါ် Over-စကားရပ် D1 receptors များ၏လည်း (မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အတူအပြိုင်အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအများဆုံးကြွေတဲ့Badanich et al ။ , 2006; Brenhouse et al ။ , 2008) ။ (ဤအဲဒီ receptor လူဦးရေမူးယစ်ဆေး-relapse ်ပတ်သက်နေခဲ့သနှင့်အရှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းယင်း၏ overexpression မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်Kalivas, 2005) ။ cortical ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုလည်း psychostimulants မှ subcortical တုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့များပါတယ်။
ဆနျ့ကငျြ, စိတ်ကြွဆေးမှ extracellular dopamine နဲ့ dopaminergic တုံ့ပြန်မှု၏ Basal အဆင့်ဆင့် (ထို accumbens အတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားလေးမွတျမပြောင်းပါဘူးFrantz et al ။ , 2007) သို့မဟုတ် mPFC (Jezierski et al ။ , 2007) ။ သို့သော် cortical အကြားအချိုး: ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏စကားရပ် accumbens က c-fos မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားစိတ်ကြွဆေးတိုးဖို့တုန့်ပြန် (Andersen က et al ။ , 2001) ။ ထို့အပြင် amphetamine သည် subcortical> cortical activation ပုံစံများကိုလူငယ်များရှိ c-fos များကိုထုတ်လုပ်သည်။Andersen က et al ။ , 2001), ဒါပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် cortical> subcortical activation (Cao et al ။ , 2007) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာ Juvenile subcortically စိတ်ကြွဆေးသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက်ပိုမိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူ-ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနေသိသိသာသာကွာခြားကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသိသိသာသာမြင့်တက်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေ subcortical လှုပ်ရှားမှုအပေါ် cortical ဖြစ်စဉ်များတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းမှအောက်ပါအတိုင်း။
5.3 ။ သိမှတ်ခံစားမှု၏ functional ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ထိုကဲ့သို့သော Stroop ရှိမုန်, Flanker, Go ကို / အဘယ်သူမျှမ-Go ကိုနှင့် Stop-Signal တာဝန်များကိုတစ်လျော့နည်းအော်တိုတဦးတည်းဖျော်ဖြေဖို့ပိုပြီးအလိုအလျှောက်အပြုအမူများ၏ဖိနှိပ်မှုလိုအပ်အဖြစ်စမ်းသပ် Paradigm ။ အာရုံစူးစိုက်မှုစည်းမျဉ်း, တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်ပဋိပက္ခနှင့်အမှားစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်ဖြစ်ကြောင်းသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များရှိပါသည်။ ဤအအလုပ်များကိုအားလုံးအပေါ် performance (ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလျှောက်လုံးတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်အနည်းဆုံးအားနှောင်းပိုင်းကငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်အထိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ကိုချဉ်းကပ်မထားဘူးBung et al ။ , 2002; ကာဇီ et al ။ , 1997; Davidson et al ။ , 2006; Luna နှင့် Sweeney, 2004; ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ et al ။ , 2000) ။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူအမျှသားသမီးများ၏ Self-စည်းမျဉ်းစွမ်းရည်တာဝန်တောင်းဆိုချက်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် Self-စည်းမျဉ်းထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်မော်တာဧရိယာထဲမှာ striatum နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုများအားလုံးသောတိုကျရိုကျမျက်စိလယ်ကွင်း, anterior cingulate cortex, dorsolateral PFC, ventralPFC / နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex အဖြစ်ယာယီနှင့် parietal ဒေသများအဖြစ်ကျယ်ပြန့် cortical ဒေသများပေါ်တွင်မူတည် အဆိုပါ subcortex (Leung et al ။ , 2000; နားမှာ et al ။ , 2007).
ထိရောက်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မရှိတော့လိုအပ်သောသို့မဟုတ်ကြောင့်မသင့်လျော်ဖြစ်ကြ၏ကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုဖိနှိပ်မှုနှင့်အတူ coupled, ရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလမျးညှနျခလိုအပ်သည်။ အခေါက်များကအဆိုပြုထားအတိုင်းဤဖိနှိပ်မှု (သုံးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကပါဝင်ပတ်သက်ရသောတုံ့ပြန်မှုတားစီးမှတဆင့်စမ်းသပ်မှုတွေအတိုင်းတာBarkley, 1997): 1 အနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတုံ့ပြန်မှု၏) အနေနဲ့ကနဦး Pre-အစွမ်းထက်တုံ့ပြန်မှု၏တားစီး, 2) ရပ်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်နှောင့်နှေးခြင်း, 3) နှောင့်နှေးကာလအတွင်းမှာဝင်ရောက်စွက်ဖက်သို့မဟုတ်အာရုံကန့်သတ်။ အဆိုပါ Basal ganglia နှင့် PFC နှစ်ဦးစလုံး (ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြတယ်ကာဇီ et al ။ , 2008) ။ ယေဘုယျခုနှစ်, Basal ganglia မသင့်လျော်အပြုအမူတွေ (၏တားစီးထိန်းချုပ်နေစဉ်Mink, 1996), အ PFC (သတင်းအချက်အလက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့လုပ်ဆောင်Miller နဲ့ Cohen ကို, 2001).
ဆနျ့ကငျြမက်လုံးပေး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုလိုအပ်ပြီးအကြီးအကျယ် PFC တစ် triadic ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့သော, striatum နှင့် amygdala (ပြန်လည်သုံးသပ် (-ရှောင်ရှားခြင်းချဉ်းကပ်ရန်Ernst နှင့် Fudge, 2009)), တုံ့ပြန်မှုတားစီး (မော်တာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အချိန်ကိုက်ထိန်းညှိကြောင်း circuitries စုဆောင်းလေ့ကျင့်Deiber et al ။ , 1999) ။ နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ကွန်ရက်များ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုစနစ်များထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပရိုဖိုင်းကိုမှကိုယ်နှိုက်ကချေးငှားသည်။
5.4 ။ တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
မြီးကောင်ပေါက်ခေတ်မီသိမြင်မှုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, လုပ်ဖို့စွမ်းရည်ဒါတသမတ်တည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်နှင့်လူကြီးသို့တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလျှောက်လုံးဒီ linear တိုးတက်မှုသိမှတ်ခံစားမှု၏ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံပြုအလားတူ linear တိုးတက်မှုနောက်ကိုလိုက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ကလေးများ (တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဒေသများတွင်လူကြီးများထက် activation ၏သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပြင်းထန်မှုကိုပြသBung et al ။ , 2002) နှစ်နိုင်ငံ medial တိုကျရိုကျ gyrus နှင့်နှစ်နိုင်ငံသာလွန်တိုကျရိုကျ gyrus ၏ medial ရှုထောင့်အပါအဝင် (Booth et al ။ , 2003) ။ ဤသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကိုဖြတ်ပြီးသွား / မသွားရတာဝန်များကိုအပေါ်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အတွက်အသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာပူးတွဲ DTI နှင့် fMRI လေ့လာမှု (Stevens နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကဖျော်ဖြေStevens et al ။ , 2009), နှစ်နိုင်ငံ frontopolar, ညာ parietal cortex နဲ့ညာဘက် caudate အကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးကဖော်ပြခဲ့သည် myelination တိုးတက်သဖြင့်, Go ကို / အဘယ်သူမျှမ Go ကိုတာဝန်အပေါ်တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်။ အခြား DTI လေ့လာမှုမှာတော့ 7-13 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အက်ဖ်အေနှင့်လက်ျာယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus နှင့်လက်ျာ Pre-ဖြည့်စွက်မော်တာ cortex နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အနိမ့်က MD နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည် (Madsen et al ။ , 2010) ။ အထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြ myelination ၏ linear ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ inverted ဦး-shaped လမ်းကြောင်းမှဆွေမျိုးသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတစ်ခုသိသာ linear ဖွံ့ဖြိုးရေး, အတူထို့ကြောင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများလည်း (go / မသွားလာရင်းစဉ်အတွင်းလက်ဝဲ caudate နျူကလိယအတွက်လူကြီးများထက် activation ပိုမိုပြင်းထန်မှုဖော်ပြရန်Booth et al ။ , 2003) နှင့်ရပ်တန့် (ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ et al ။ , 1999) လုပ်ငန်းတာဝန်များ။ အဆိုပါ Basal ganglia (မသင့်လျော်အပြုအမူတွေ၏တားစီးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီကာဇီ et al ။ , 2001), နှင့် Basal ganglia လူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ linearly ရင့်ကျက်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဤအဆားကစ်၏အခြေခံ neurobiology ဖြစ်စေယခင်ကအထက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်အတွင်းကိုလေ့လာခံရဖို့ရှိသေးပါပြီ။ တုန့်ပြန်တားစီးတာဝန်များကိုပတျဝနျးကငျြ neuroimaging အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးဥစ္စာဓနရှိစဉ်အခါ, ထိုစနစ်များကိုနောက်ကွယ်မှ neurochemistry ၏လျော့နည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိခဲ့သည် (ကပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, လင်းယုန် et al ကြည့်ပါ။ , 2008) ။ ဤအအပြုအမူတွေ၏ preclinical မော်ဒယ်နှင့်ဆက်စပ်အဓိကပြဿနာများတစ်ခုမှာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုမရှိချေသောဤတာဝန်များကို, ဖျော်ဖြေဖို့တိရိစ္ဆာန်များလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်သည်သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတည်ရှိသည်။ အရေးပါပုံကိုလူကြီးသို့ဆယ်ကျော်သက်ရငျ့စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စည်းမျဉ်းကြောင်းပေးထား, ဒီလယ်ကွက်ကလက်ခံရရှိခဲ့သည်ထက် ပို. အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သည်။
6 ။ အတွေ့အကြုံကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံသွင်းသွင်း
မျိုးဗီဇဦးနှောက်တည်ဆောက်ဖို့အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုနေစဉ်, အတှေ့အကွုံပတ်ဝန်းကျင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကိုက်ညီသောဦးနှောက်ကိုပန်းပုထု။ ပေးထားသော synapses ၏နောက်ဆုံးကံကြမ္မာအလုပ်လုပ်တဲ့ validation ကိုအပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်မသာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှထူးခြားဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လည်း (ရသောအခါအစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများမန်နီးဖက်စ်ကာလဖြစ်ပါသည်Andersen က, 2003; Andersen ကနှင့် Teicher, 2008) ။ ရှုပ်ထွေးသောအာရုံကြောကွန်ရက်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အလှည့်တွင်ဤ (နှစ်ဦးစလုံးအလိုအလျောက်နှင့်အတွေ့အကြုံ-မောင်းနှင်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ထုဆစ်နေကြတယ်ဗင်္ Ari, 2002; Francis က et al ။ , 2002; Katz နှင့် Shatz, 1996; Zhang ကနှင့် Poo, 2001) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းကပြန်လည်သုံးသပ် (Andersen က, 2003) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ရှိသည်သောသိသိသာသာသက်ရောက်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အခြားအပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ရှိပါတယ်သက်ရောက်မှုအားဆွေးနွေးရန်Andersen ကနှင့် Teicher, 2008; 2009) ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကာလအတွင်းစိတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုလည်း (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းထွန်းသစ်စသည့်ဆိုးကျိုးများနှင့်အတူတစ်ဦးဒုံးကျည်သွားလမ်း၏သင်တန်းပြောင်းလဲပစ်ပါလိမ့်မယ်Brenhouse et al ။ , 2009; Ansorge et al ။ , 2008).
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ tools တွေကိုပိုပြီးချော-ဘောဇဉ်ဖြစ်လာအဖြစ်ဦးနှောက် neuroanatomy အတွင်းဆယ်ကျော်သက်ရွယ်အပြောင်းအလဲများကို၏သဘောသဘာဝနှင့်အတိုင်းအတာအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးများအလုပ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားမှု (ဥပမာ (အတွင်းလေ့လာခဲ့ကြသောအခါမတူကွဲပြားခြင်းသာအပြည့်အဝတန်ဖိုးထားရနိုင်Gogtay et al ။ , 2006)), ပြည့်စုံစရိုက်လက္ခဏာတွေ၏ timecourse နှင့်တဲ့အခါမှာစောစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများ (နဲ့အတူAndersen ကနှင့် Teicher, 2008) နှင့်အခြားအချက်များ (ဥပမာ, လိင်, သားရေလုပ်သမားဇာတ်စင်) ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ အစောပိုင်းလေ့လာမှုများအတွက်မပြည့်စုံ timecourses တှငျဆှေးနှေးရငျ့ (များ၏အချိန်ကိုက်အကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကြောင်းကောက်ချက်မှဦးဆောင်ကြပါပြီ McCutcheon နှင့် Marinelli, 2009) နှင့်အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများအမှန်ပင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတထိခိုက်စေပါဘူးရှိမရှိ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးရန်၎င်း၏အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းဦးနှောက်ထဲမှာဆယ်ကျော်သက်အပြောင်းအလဲများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနားလည်မှုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါသည်။ ဒါကထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြောင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစနစ်ကယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု plasticity ဖို့အလွန်အမင်းဒဏ်ခံဖြစ်ပါတယ်။
လူသားများနှင့်ကြွက်ကိုဖြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏ Timeline ကို။ ပန်းရောင်အရက်ဆိုင်အပြာရောင်ဘားအတွက်ကိုယ်စားပြုယောက်ျား၏ကြောင်း precedes ပေးသောအမျိုးသမီးများအတွက်အချိန်ဇယား, ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ receptors ၏ယာယီစကားရပ် ( "ectopic") အစောပိုင်းအသက်တာ၌ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ...
Neuroanatomical အပြောင်းအလဲများကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူ juxtaposed နေကြသည်။
ကျနော်တို့ ပို. ပို. ထိခိုက်မခံတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်း tools များနှင့်အတူနားလည်မှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆွေးနွေးပါ။
Adriani W က, psychopathology နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်ကုထုံးနည်းဗျူဟာအားနည်းချက်၏ Laviola G. အကို Windows ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2004; 15: 341-352 ။ [PubMed]
Anda RF, Felitti VJ, Bremner JD, Walker က JD, Whitfield ကို C, ပယ်ရီ bd, Dube SH R ကို, Giles WH ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်ဆက်စပ်ဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများများ၏တည်မြဲသက်ရောက်မှု: neurobiology နှင့်ရောဂါကနေသက်သေအထောက်အထားတစ်ခု convergence ။ EUR Arch စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin neuroscience ။ 2006; 256: 174-86 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Anda RF, Whitfield CL, Felitti VJ, ချပ်မန်းက D, Edwards က VJ, Dube SR, Williamson DF ။ ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများ, အရက်မိဘ, အရက်နှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏နောက်ပိုင်းတွင်စွန့်စားမှု။ စိတ်ရောဂါစားသုံးခြင်း။ 2002; 53: 1001-9 ။ [PubMed]
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းဒုတိယ messenger ကိုသိသိ amp အတွက် Andersen ကအက်စ်အပြောင်းအလဲများ Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) အပြုအမူဦးနှောက်သုတေသနအတွက်မော်တော်လက္ခဏာတွေအခြေခံလိမ့်မည်။ 2002; 130: 197-201 ။ [PubMed]
Andersen က SL ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လမ်းကြောင်း: အခွင့်အလမ်းအားနည်းချက်သို့မဟုတ် window ၏အချက်? neuroscience Biobehav ဗျာ 2003; 27: 3-18 ။ [PubMed]
Andersen က SL ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2005; 26: 237-43 ။ [PubMed]
Andersen က SL, LeBlanc CJ, Lyss PJ ။ အဆိုပါကွှ dopamine စနစ်များအတွက်က c-fos စကားရပ်အတွက်ရင့်ကျက်တိုး။ synapses ။ 2001; 41: 345-50 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Rutstein M က, Benzo JM, Hostetter JC, Teicher MH ။ dopamine အဲဒီ receptor overproduction နှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuroreport ။ 1997; 8: 1495-8 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Teicher MH ။ hippocampal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အစောပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှောင့်နှေး။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 1988-93 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Teicher MH ။ စိတ်ဖိစီးမှု, အထိခိုက်မခံကာလများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျရောဂါအတွက်ရင့်ကျက်ဖြစ်ရပ်များ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2008 [PubMed]
Andersen က SL, Teicher MH ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်: အသည်းအသန်အဘယ်သူမျှမဘရိတ်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2009; 33: 516-24 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Andersen က SL, Thompson ကအေပီ, Krenzel အီး, Teicher MH ။ gonadal ဟော်မုန်းအတွက် Pubertal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction အခြေခံကြပါဘူး။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27: 683-91 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Thompson က AT, Rutstein M က, Hostetter JC, Teicher MH ။ ကြွက်များတွင် periadolescent ကာလအတွင်း prefrontal cortex အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကို။ synapses ။ 2000; 37: 167-9 ။ Process ကိုကိုးကားပါတယ်။ [PubMed]
Anderson က SA, Classey JD, အခြေအနေက F, Lund JS, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex ၏အလွှာ III ကိုအတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံဆဲလျ dendritic ကျောရိုးနှင့် parvalbumin-immunoreactive chandelier အာရုံခံဆဲလျ axon ဆိပ်ကမ်း၏ synchronous ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ neuroscience ။ 1995; 67: 7-22 ။ [PubMed]
Ansorge က MS, Morelli အီး, Gingrich ဂျေအေ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း serotonin ၏တားစီးသော်လည်းမ norepinephrine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြွက်တွေမှာစိတ်ခံစားမှုအပြုအမူတွေ၏နှောင့်နှေး, မြဲထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းထုတ်လုပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 199-207 ။ [PubMed]
Arnett JJ ။ ထွန်းသစ်စလူကြီး။ အဆိုပါနှစ်ဆယ်ကျော်မှတဆင့်နှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးကသီအိုရီ။ နံနက် Psychol ။ 2000; 55: 469-80 ။ [PubMed]
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက် Asato MR, Terwilliger R ကို, ဝူး J ကို, Luna ခ White ကအရေးပါဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: တစ်ဦးက DTI လေ့လာပါ။ Cereb Cortex ။ 2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ashtari M က, Cervellione KL, Hasan KM, Wu J ကို, McIlree ကို C, Kester H ကို, Ardekani BA, Roofeh: D, Szeszko PR စနစ်, Kumra အက်စ်အဖြူရောင်ကိစ္စဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျန်းမာအထီးနှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း: cross-section ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2007; 35: 501-10 ။ [PubMed]
Badanich Ka, Adler KJ, Kirstein CL ။ မြီးကောင်ပေါက်နျူကလီးယပ်အတွက် preference ကိုနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine septi accumbens ကင်းသောအခြေအနေများအရပျ၌လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2006; 550: 95-106 ။ [PubMed]
Bari ကတစ်ဦး, လင်းယုန် DM, Apr AC အ, ရော်ဘင်ဆင် ES, Robbins TW ။ noradrenaline, dopamine, နှင့်ကြွက်များတွင်ရပ်တန့်လုပ်ငန်းတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် serotonin လွှာမှပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ Dissociable ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2009; 205: 273-83 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Barkley RA ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ, Self-စည်းမျဉ်းများနှင့်အချိန်: ပိုပြီးပြည့်စုံသီအိုရီဆီသို့။ J ကို Dev မှနျစှာနထေိုကလေး။ 1997; 18: 271-9 ။ [PubMed]
Basser PJ, Pierpaoli C. Microstructural နှင့်အရေအတွက်-ပျံ့နှံ့-tensor MRI အားဖြင့် elucidated တစ်ရှူး၏ဇီဝကမ္မ features တွေ။ J ကို Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုခ 1996; 111: 209-19 ။ [PubMed]
Bechara တစ်ဦးက, Damasio H ကို, Damasio AR, Lee ကမိသားစုဆရာဝန်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူ့ amygdala နှင့် ventromedial prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောပံ့ပိုးမှုများကို။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 5473-81 ။ [PubMed]
Beesdo K ကို Lau JY, Guyer AE, လူယာ-Tone ကို eb, ရဟန်းတော် CS, နယ်လ်ဆင် EE, Fromm SJ, Goldwin MA, Wittchen Hu, Leibenluft အီး, Ernst M က, ထင်းရူး DS ။ စိုးရိမျမြီးကောင်ပေါက် vs စိတ်ဓာတ်ကျမှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့နှင့်ကွဲပြား amygdala-function ကိုအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 66: 275-85 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းဂါဘမြို့သားများဘင်-Ari Y. Excitatory လုပ်ရပ်များ: အပွား၏သဘောသဘာဝ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2002; 3: 728-39 ။ [PubMed]
ဂိ FM ရေ။ Schizophrenia အတွက် Amygdalocortical Circuitry: Circuits မှစ. မော်လီကျူးရန်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂိ FM ရေ, Majocha R ကို, Bird ကို ED, Marotta CA. schizophrenics ၏ cingulate cortex အတွက်ဒေါင်လိုက် axon နံပါတ်များကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု၏မော်ကွန်း။ 1987; 44: 1017-21 ။ [PubMed]
ဂိ FM ရေ, တေလာ JB, Cunningham MC ။ psychopathology ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: အ postnatal ကာလအတွင်း medial prefrontal cortex အတွက် monoaminergic စနစ်များ convergence နှင့် plasticity ။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 1014-27 ။ [PubMed]
ဂိ FM ရေ, လိပ် M က, Khan က Y ကို, အ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်သော့ချက် relay ကိုဇုန်၏ Farol P. Myelination ကလေးဘဝ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းလူ့ဦးနှောက်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 51: 477-84 ။ [PubMed]
ဂိ FM ရေ, ဗင်းဆင့် SL, Molloy R ကို, Khan က Y. cortex ဟာ postweanling ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြွက် medial prefrontal ၏ဂါဘမြို့သားအာရုံခံနှင့်အတူ dopamine-immunoreactive varicosities ၏အပြန်အလှန်တိုးမြှင့်။ synapses ။ 1996; 23: 237-45 ။ [PubMed]
Bern GS, လူယာသည် SM, Pagnoni, G, ဂူ PR စနစ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆုချမှလူ့ဦးနှောက်ကိုတုန့်ပြန် modulates ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 2793-8 ။ [PubMed]
Biswal BB, Mennes M က, Zuo XN, Gohel S က, ကယ်လီကို C, စမစ်သည် SM, Beckmann CF, Adelstein JS, Buckner RL, Colcombe S က, Dogonowski လေး, Ernst M က, တရားမျှတသော: D, Hampson M က, Hoptman MJ, Hyde JS, Kiviniemi VJ , Kotter R ကိုလီ SJ, လင်းက CP, Lowe MJ, Mackay ကို C, က Madden DJ သမား, Madsen KH, Margulies DS, Mayberg HS, McMahon K ကိုရဟန်းတော် CS, Mostofsky SH, Nagel BJ, Pekar JJ, Peltier SJ, Petersen SE, Riedl V ကို, Rombouts လုပ် SA, Rypma B, Schlaggar BL, Schmidt က S နဲ့, Seidler RD, Siegle GJ, Sorg ကို C, Teng GJ, Veijola J ကို, Villringer တစ်ဦးက, ဝေါလ်တာက M, ဝမ် L ကို, Weng XC, Whitfield-Gabrieli S က, Williamson P ကို, Windischberger ကို C, Zang YF, Zhang က hy, Castellanos FX, Milham အမတ်။ လူ့ဦးနှောက် function ကို၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသိပ္ပံဆီသို့။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 107: 4734-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bjork JM, Knutson B, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, Hommer DW ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: တူညီနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 1793-802 ။ [PubMed]
: D, Mormino EC, Thompson ကလေး, McCracken JT, Toga AW ရန် Blanton RE, Levitt JG, Peterson JR, Fadale: D, sporty ML, Lee က M ကို။ သာမန်ကလေးတွေအတွက်ဘယ်ဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Neuroimage ။ 2004; 22: 626-36 ။ [PubMed]
Booth JR, ဗမာလူမျိုး DD, Meyer JR, လဲ့ Z ကို, Trommer BL, Davenp သို့မဟုတ် t ND လီ W က, Parrish တီဘီ, Gitelman DR, Mesulam MM ။ ရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Neuroimage ။ 2003; 20: 737-51 ။ [PubMed]
Bremner JD, Narayan M က, Staib LH, Southwick သည် SM, McGlashan T က, Charney DS ။ အာရုံကြောနှင့် posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါမရှိဘဲအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအမှတ်တရများ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 1787-95 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Brenhouse H ကို, Sonntag KC, Andersen က SL ။ prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ် Over-expression ကိုယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင်စိတ်ခွန်အားနိုး salience တစ်ယန္တရား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008; 28: 2375-2382 ။ [PubMed]
Brenhouse HC, Napierata L ကို, Kussmaul L ကို, Leussis M က, Andersen က SL ။ Juvenile methylphenidate ထိတွေ့မှုနှင့်မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအချက်များ။ Dev မှ neuroscience ။ 2009; 31: 95-106 ။ [PubMed]
Broyd SJ, Demanuele ကို C, Debener S က, SK ကိုဂျိမ်းစ် CJ, Sonuga-အခေါက် EJS ကူညီပေးသည်။ စိတ်ရောဂါအတွက် default-mode ကိုဦးနှောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2009; 33: 279-96 ။ [PubMed]
Brummelte S က, Teuchert-Noodt G. အ Postnatal အဆိုပါ amygdala အတွက် dopamine innervation ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တက်လာတယ်, (Meriones unguiculatus) ဦးနှောက် Res ၏ entorhinal cortex ။ 2006; 1125: 9-16 ။ [PubMed]
Bung လုပ် SA, Dudukovic မိုင်, Thomason ME, Vaidya CJ, Gabrieli JD ။ ကလေးများအတွက်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပံ့ပိုးမှုများကို: fMRI ထံမှသက်သေအထောက်အထား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 33: 301-11 ။ [PubMed]
Cao J ကို, Lotfipour S က, Loughlin SE, Leslie FM ရေ။ ကိုကင်း-အထိခိုက်မခံအာရုံကြောယန္တရားများ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးရငျ့။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 2279-89 ။ [PubMed]
Cardinal RN, ပါကင်ဂျာခန်းမ J ကို, Everitt BJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အပု amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2002; 26: 321-52 ။ [PubMed]
Cardinal RN, ပါကင်ဂျာ Marbini HD ကို, Toner AJ, Bussey တီဂျေ, Robbins TW, Everitt BJ ။ ကြွက်များတွင် Pavlovian conditional လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် anterior cingulate cortex ၏အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2003; 117: 566-87 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Castellanos FX, Giedd ဖြစ်မှု, နားမှာ WL, ဟမ်ဘာဂါ SD, Schubert AB, Vauss YC, Vaituzis AC အ, Dickstein DP, Sarfatti SE, Rapoport JL ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၌တရား frontostriatal circuitry ၏ဆိုလို။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 36: 374-83 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Forman SD, Franzen P ကို, Berkowitz တစ်ဦးက, Braver TS, Nystrom LE, သောမတ်စ် KM, Noll DC က။ ပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများမှ prefrontal cortex ၏ sensitivity: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2001; 13: 26-33 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, ဂျုံးစ် RM, Hare က TA ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2008; 1124: 111-26 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Caviness VS, Jr. ကနေဒီ DN, Richelme ကို C, Rademacher J ကို, Filipek PA ဆိုပြီး။ လူ့ဦးနှောက်ကိုအသက်အရွယ် 7-11 နှစ်ပေါင်း: သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးထုထည်ကြီးမားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 1996; 6: 726-36 ။ [PubMed]
Cerghet M က, Skoff RP, Bessert: D, Zhang က Z ကို, Mullins ကို C, Ghandour က MS ။ oligodendrocytes နှင့် myelin ပရိုတိန်း၏ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်သေခြင်း differential ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 1439-47 ။ [PubMed]
Changeaux JP, အာရုံခံကွန်ရက်များ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတွက်ယန္တရားအဖြစ် synapses ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ Danchin အေရွေးချယ်တည်ငြိမ်။ သဘာဝ။ 1976; 264: 705-12 ။ [PubMed]
ချပ်မန်း DP, Whitfield CL, Felitti VJ, Dube SR, Edwards က VJ, Anda RF ။ ဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်လူကြီးအတွက်စိတ်ကျရောဂါမမှန်များ၏အန္တရာယ်ကို။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2004; 82: 217-25 ။ [PubMed]
Chugani HT ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏တစ်ဦးကအရေးပါကာလ: ပေနှင့်အတူနှောက်ဂလူးကို့စအသုံးချ၏လေ့လာမှုများ။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာ။ 1998; 27: 184-8 ။ [PubMed]
Chugani HT, Phelps ME, Mazziotta JC ။ လူ့ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ အမ်း Neurol ။ 1987; 22: 487-97 ။ [PubMed]
Clark က AS, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ Gonadal ဟော်မုန်း nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် cortical function ကိုပေါ်ပေါက်ရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1989; 103: 1287-95 ။ [PubMed]
အခြေအနေက F, Lund JS, Lewis က DA ။ parvalbumin-immunoreactive အာရုံခံ၏ရငျ့ခွငျးအားဖွငျ့ဖျောပွထားပါတအဖြစ်မျောက်အမြင်အာရုံ cortical တိုင်းဒေသကြီးများ၏ hierarchical ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1996; 96: 261-76 ။ [PubMed]
Constantinidis ကို C, Williams က GV, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ prefrontal cortex အတွက်သတင်းအချက်အလက်များ၏ယာယီစီးဆင်းမှုပုံဖော်အတွက်တားစီးတစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2002; 5: 175-80 ။ [PubMed]
ကော့ ET, Brennaman LH, Gable KL, Hamer-RM, Glantz LA က, Lamantia AS, Lieberman ဂျာ Gilmore JH, Maness PF, Jarskog LF ။ လူ့ prefrontal cortex အတွက်အာရုံကြောဆဲလ်ကော်မော်လီကျူး၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း။ neuroscience ။ 2009; 162: 96-105 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cressman VL, Balaban J ကို, Steinfeld က S, Shemyakin တစ်ဦးက, ဂရေဟမ် P ကို, Parisot N က, အ Basal amygdala မှ Moore ကအိပ်ချ် Prefrontal cortical သွင်းအားစုကြွက်နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတံစဉ်များကိုခံယူ။ J ကို comp Neurol ။ 2010; 518: 2693-709 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သင်္ဘောသားက F, သူ J ကို, Hodge C. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုး: စွဲဘို့အားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2007; 86: 189-99 ။ [PubMed]
Cruz DA, Eggan သည် SM, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံနှင့်အတူ chandelier ဆဲလ်ဆက်သွယ်မှုမှာအကျူးများနှင့် postsynaptic ဂါဘမြို့သားအမှတ်အသားများ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ J ကို comp Neurol ။ 2003; 465: 385-400 ။ [PubMed]
Cruz DA, Lovallo EM, ချတက S, Rasband M က, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex အတွက်ကနဦး segments များ axon ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံဆဲလျအတွက် Synaptic ဖွဲ့စည်းပုံမှာပရိုတိန်း၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ J ကို comp Neurol ။ 2009; 514: 353-67 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cunningham MG, Bhattacharyya S ကိုစေလွှတ် FM ရေ။ Amygdalo-cortical ပေါက်အစောပိုင်းလူကြီးသို့ဆက်လက်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော function ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ J ကို comp Neurol ။ 2002; 453: 116-30 ။ [PubMed]
Dalley JW, Cardinal RN, Robbins TW ။ ကြွက်များတွင် Prefrontal အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို: အာရုံကြောနှင့် neurochemical အလွှာဟာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2004; 28: 771-84 ။ [PubMed]
Davidson MC, Amso: D, Anderson က LC,4ကနေသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏စိန်အေဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ 13 နှစ်: မှတ်ဉာဏ်, တားစီးနှင့်လုပ်ငန်းတာဝန် switching ၏ထိန်းသိမ်းရေးထံမှသက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychologia ။ 2006; 44: 2037-78 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Davis ကလေး, ဆက်မက်ကာသီဟာ MM ။ (3) H-muscimol အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတိုးကြွက်၏ hypothalamic နှင့် limbic ဒေသများရှိ Gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (က) အဲဒီ receptor မှ binding: အဘယျကွောငျ့ hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယတစ်ဦးချွင်းချက်ဖြစ်သနည်း neuroscience လက်တ။ 2000; 288: 223-7 ။ [PubMed]
Deiber အမတ်, ဟွန်ဒါ M က, Ibanez V ကို, Sadato N က, Self-အစပျိုး fMRI နှင့်အတူဆန်းစစ်ပြင်ပမှဖြစ်ပေါ်လှုပ်ရှားမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်အတွက် Hallett အမ် Mesial မော်တာဒေသများ: လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားနှင့်နှုန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို Neurophysiol ။ 1999; 81: 3065-77 ။ [PubMed]
di Cristo, G, Chattopadhyaya B, Kuhlman SJ, ဖူ Y ကို, Bélanger MC, Wu CZ, Rutishauser ဦး, Maffei L ကို, Huang က ZJ ။ Activity ကို-မှီခို PSA စကားရပ်အရေးပါကာလ plasticity ၏ inhibitory ရငျ့နှင့်စတင်ခြင်းထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1569-77 ။ [PubMed]
ပုံမှန် postnatal လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် schizophrenia အတွက် Duncan ကအီး, Webster MJ, Rothmond DA, Bahn S က, Elashoff M က, Shannon Weickert C. Prefrontal ဂါဘမြို့သား (က) အဲဒီ receptor alpha-subunit စကားရပ်။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 44: 673-81 ။ [PubMed]
Durston S က, Hulshoff Pol သူ, Casey BJ, Giedd ဖြစ်မှု, Buitelaar JK, ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူ့ဦးနှောက်၏ဗန် Engeland အိပ်ချ် Anatomical MRI: ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့သင်ယူကြသနည်း J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 40: 1012-20 ။ [PubMed]
Durston S က, စပါး NT, သောမတ်စ် KM, Davidson MC, Eigsti ထားတဲ့ IM, ယန် Y ကို, Ulug လေး, Casey BJ ။ နှင့် ADHD မပါဘဲကလေးငယ်များအတွက် striatal activation ၏ differential ပုံစံများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 53: 871-8 ။ [PubMed]
လင်းယုန် DM, Baunez C. ကြွက်ရှိတစ်ဦး inhibitory-တုံ့ပြန်မှု-ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အလား? အမူအကျင့်တားစီး၏ခန္ဓာဗေဒနှင့် pharmacological လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2010; 34: 50-72 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လင်းယုန် DM, Tufft MR, Goodchild HL, Robbins TW ။ ရပ်တန့်-signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန် task ကကြွက်များတွင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်, dopamine အဲဒီ receptor ရန် CIS-flupenthixol နှင့်အတူအပြန်အလှန်အပေါ် modafinil နှင့် methylphenidate ၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 192: 193-206 ။ [PubMed]
Eckenhoff MF, အမျောက်တွေကိုအတွက် dentate gyrus ၏မော်လီကျူးအလွှာတွင် synaptogenesis ၏ Rakic ​​P. တစ်ဦးကအရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1991; 64: 129-35 ။ [PubMed]
Eggan သည် SM, Mizoguchi Y ကို, Stoyak SR, Lewis က DA ။ မျောက် dorsolateral prefrontal cortex အတွက် cannabinoid 1 Receptor protein အားနှင့်တမန် RNA ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ Cereb Cortex ။ 2010; 20: 1164-74 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Elliott သည် R ကို, Dolan RJ, Frith CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ medial နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex အတွက် Dissociable လုပ်ဆောင်ချက်များကို: လူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 308-17 ။ [PubMed]
Elliott သည် R ကို, Newman က JL, Long oa, Deakin JF ။ လူသားတွေအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ပေးရန် striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွက် differential တုံ့ပြန်မှုပုံစံများ: တစ် parametric အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 303-7 ။ [PubMed]
Eluvathingal တီဂျေ, Hasan KM, Kramer က L, ဖလက်ချာ JM, ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အသင်းအဖွဲ့နှင့်စီမံကိန်းအမျှင်၏ Ewing-Cobbs အယ်လ်ဘက်စုံပျံ့နှံ့ tensor tractography ။ Cereb Cortex ။ 2007; 17: 2760-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နိုင်ကြောင်း SL, Akil M က, Levey AI အ, Lewis က DA ။ tyrosine hydroxylase- နှင့် dopamine ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးမျောက် rostral entorhinal cortex အတွက် immunoreactive axon transporter- ။ Cereb Cortex ။ 1998; 8: 415-27 ။ [PubMed]
နိုင်ကြောင်း SL, Sesack SR, Lewis က DA ။ မျောက် entorhinal cortex ၏ Dopamine innervation: tyrosine hydroxylase-immunoreactive ဆိပ်ကမ်း၏ postsynaptic ပစ်မှတ်။ synapses ။ 2000; 36: 47-56 ။ [PubMed]
Ernst M က, Fudge JL ။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiological မော်ဒယ်: အ triadic node များ၏ခန္ဓာဗေဒ, ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ontogeny ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2009; 33: 367-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ernst M က, Korelitz Ke ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်နှောက်ရငျ့: အပြုအမူအားနည်းချက်။ Encephale ။ 2009; 35 (ပျော့ပျောင်း 6): S182-9 ။ [PubMed]
Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, Jazbec S က, လူယာ eb, ရဟန်းတော် CS, Leibenluft အီး, တိုနီဘလဲ J ကို, ထင်းရူး DS ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage ။ 2005; 25: 1279-91 ။ [PubMed]
Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, လူယာ eb, ရဟန်းတော် CS, Munson S က, Eshel N ကို, Zarahn အီး, Leibenluft အီး, Zametkin တစ်ဦးက, Towbin K ကိုတိုနီဘလဲ J ကို, Charney: D, ထင်းရူး DS ။ ရှေးခယျြမှုရွေးချယ်ရေးနှင့်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychologia ။ 2004; 42: 1585-97 ။ [PubMed]
Ernst M က, ထင်းရူး DS, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Hardin အမ် Triadic မော်ဒယ်။ Psychol Med ။ 2006; 36: 299-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
တရားမျှတသော DA, Cohen ကို AL, Dosenbach NU, ဘုရားကျောင်း JA, Miezin FM ရေ, Barch DM, Raichle ME, Petersen SE, Schlaggar BL ။ ဦး နှောက်၏မူလကွန်ယက်၏ရင့်ကျက်မှုတည်ဆောက်ပုံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2008; 105: 4028-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
တရားမျှတသော DA, Cohen ကို AL, ပါဝါ JD, Dosenbach NU, ဘုရားကျောင်းဂျာ Miezin FM ရေ, Schlaggar BL, Petersen SE ။ functional ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုအဖှဲ့အစညျးကို "ဖြန့်ဝေဖို့ဒေသဆိုင်ရာ" မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ PLoS computing Biol ။ 2009; 5: e1000381 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
တရားမျှတသော DA, Dosenbach NU, ဘုရားကျောင်းဂျာ Cohen ကို AL, Brahmbhatt S က, Miezin FM ရေ, Barch DM, Raichle ME, Petersen SE, Schlaggar BL ။ အသားအရောင်ခွဲခြားနှင့်ပေါင်းစည်းမှုမှတဆင့်ကွဲပြားထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104: 13507-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Falkenstein M က, Hoormann J ကို, ခရစ်တော်က S, တုံ့ပြန်မှုအမှားအယွင်းများနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုအပေါ် Hohnsbein ဂျေ ERP အစိတ်အပိုင်းများ: တစ်သင်ခန်းစာ။ Biol Psychol ။ 2000; 51: 87-107 ။ [PubMed]
Feeney DM, Westerberg vs. Norepinephrine နှင့်ဦးနှောက်ပျက်စီးမှု: alpha noradrenergic ဆေးဝါးဗေဒ cortical စိတ်ဒဏ်ရာပြီးနောက် functional ဖြစ်စေပြန်လည်နာလန်ထူပွောငျးလဲ။ J ကို Psychol နိုင်သလား။ 1990; 44: 233-52 ။ [PubMed]
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Feinberg ဗြဲအဲဒါတွေက Metabolic ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို: တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်လည်ဖွဲ့စည်း၏တဦးတည်းရှုထောင့်, အမ်း Neurol ။ 1988; 24: 464-5 ။ [PubMed]
fields RD ။ Myelination: Synaptic plasticity တစ်ခုသတိမမူယန္တရား? အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2005; 11: 528-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Forbes မဂ္ဂဇင်း EE, Dahl RE ။ အပြုသဘော၏အာရုံကြောစနစ်များကိုထိခိုက်စေ: နားလည်မှုကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျရောဂါမှဆက်စပ်မှု? dev Psychopathol ။ 2005; 17: 827-50 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Francis က DD, Diorio J ကို, Plotsky pm တွင်, Meaney MJ ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန့်စင်စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုအပေါ်မိခင်ခွဲခြာ၏သက်ရောက်မှုနောက်ကြောင်းပြန်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 7840-3 ။ [PubMed]
Frantz KJ, O'Dell LE, Parsons LH ။ periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကိုကင်းအားအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 625-37 ။ [PubMed]
အကျိုးကိုစနစ်၏သွပ်ရည်စိမ်အေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ တပ်ဦး Hum neuroscience ။ 2010; 4:6။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Davidson က M, Spicer J ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုအတွက် ventral frontostriatal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 8650-6 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 6885-92 ။ [PubMed]
Geier ကို C, Luna ခမက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ရငျ့။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009; 93: 212-221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gelbard HA, Teicher MH, Baldessarini RJ, Gallitano တစ်ဦးက, နားမှာ ER, Zorc J ကို, Faedda G. အ Dopamine D1 အဲဒီ receptor ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ endogenous dopamine ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1990; 56: 137-40 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, Castellanos FX, လျူ H ကို, Zijdenbos တစ်ဦးက, pause T က, အီဗန်, AC, Rapoport JL ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ နတ် neuroscience ။ 1999a; 2: 861-3 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, Rajapakse JC, Vaituzis AC အ, လျူ H ကို, Berry ဟာ YC, Tobin က M, နယ်လ်ဆင် J ကို, Castellanos FX ။ တစ်ဦး longitudinal MRI လေ့လာမှု: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူ့ Corpus callosum ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999b; 23: 571-88 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Keshavan M က, Tomas pause ။ အဘယ်ကြောင့်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008;9(12): 947-957 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Rumsey JM, Castellanos FX, Rajapakse JC, Kaysen: D, Vaituzis AC အ, Vauss YC, ဟမ်ဘာဂါ SD, Rapoport JL ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် Corpus callosum တစ်အရေအတွက် MRI လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1996a; 91: 274-80 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Snell JW, Lang N ကို, Rajapakse JC, Casey BJ, Kozuch PL, Vaituzis AC အ, Vauss YC, ဟမ်ဘာဂါ SD, Kaysen: D, Rapoport JL ။ လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ quantitative သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်: အသက်အရွယ် 4-18 ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 1996b; 6: 551-60 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Vaituzis AC အ, ဟမ်ဘာဂါ SD, Lang N ကို, Rajapakse JC, Kaysen: D, Vauss YC, Rapoport JL ။ အဆိုပါယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, amygdala နှင့်သာမန်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် hippocampus ၏ quantitative MRI: အသက်အရွယ် 4-18 နှစ်ပေါင်း။ J ကို comp Neurol ။ 1996c; 366: 223-30 ။ [PubMed]
Glantz LA က, Gilmore JH, Hamer-RM, Lieberman ဂျာ Jarskog LF ။ အစောပိုင်းလူကြီးသို့လယ်ပိုင်းကိုယ်ဝန်ကနေလူ့ prefrontal cortex အတွက် Synaptophysin နှင့် postsynaptic သိပ်သည်းဆပရိုတိန်း 95 ။ neuroscience ။ 2007; 149: 582-91 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gogtay N ကို, Nugent TF, 3rd, Herman DH, Ordonez တစ်ဦးက, Greenstein: D, Hayashi KM, Clasen L ကို, Toga AW, Giedd ဖြစ်မှု, Rapoport JL, Thompson ကဝန်ကြီးချုပ်။ သာမန်လူ့ hippocampal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ Hippocampus ။ 2006 [PubMed]
စတိန်း, G, Panchalingam K ကိုလူယာ RJ, Stanley ဂျာ Calhoun VD, Pearlson GD, Pettegrew JW ။ မော်လီကျူး neurodevelopment: တစ်ဦးအတွက် Vivo 31P-1H MRSI လေ့လာမှု။ J ကို Int Neuropsychol Soc ။ 2009; 15: 671-83 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလိယ၏ limbic နှင့် cortical drive ကို၏ Dopaminergic မော်ဂျူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 805-12 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Rosenkranz ဂျေအေ။ basolateral amygdala အာရုံခံ၏အခွအေနေတုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 2002; 77: 489-93 ။ [PubMed]
Haber SN, Rauch SL ။ Neurocircuitry: အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါအခြေခံကွန်ယက်သို့ပြတင်းပေါက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 1-3 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hajszan T က, Dow တစ်ဦးက, Warner-Schmidt က JL, Szigeti-ဘာ့ K ကို Sallam NL, Parducz တစ်ဦးက, Leranth ကို C, Duman သည် RS ။ ကြွက်များတွင် hippocampal ကျောရိုး synapses ၏ပြုပြင်စိတ်ကျရောဂါ၏အကူအညီမဲ့မော်ဒယ်သင်ယူခဲ့တယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 392-400 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Happe ဟောင်ကောင်, Coulter CL, Gerety ME, Sanders JD, O'Rourke M, Bylund DB, Murrin LC ။ ကြွက် CNS အတွက် Alpha-2 adrenergic အဲဒီ receptor ဖှံ့ဖွိုးတိုး: တစ် autoradiographic လေ့လာမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004; 123: 167-78 ။ [PubMed]
Harris က LW, Lockstone သူ, Khaitovich P ကို, Weickert CS, Webster MJ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortex အတွက် Bahn အက်စ် Gene စကားရပ်: schizophrenia စတင်ခြင်းများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ BMC Med Genomics ။ 2009; 2: 28 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hashimoto T က, ငုယင် QL, Rotaru: D, Keenan T က, Arion: D, Beneyto M က, Gonzalez-Burgos, G, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex အတွက်ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor alpha1 နှင့် alpha2 subunit စကားရပ်၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 1015-23 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Henson MA, Roberts သည် AC အ, Salimi K ကို Vadlamudi S က, Hamer-RM, Gilmore JH, Jarskog LF, Philpot bd ။ လူ့ prefrontal cortex အတွက် NMDA အဲဒီ receptor subunits ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း, NR3A နှင့် NR1 ။ Cereb Cortex ။ 2008; 18: 2560-73 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပျားရည် CJ, Sporns အို Cammoun L ကို, Gigandet X ကို, Thiran JP, Meuli R ကို, Hagmann P. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကနေလူ့ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2009; 106: 2035-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Horvitz JC ။ အဆိုပါ striatum မှ glutamatergic sensorimotor နှင့်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုး input ကိုအချက်ပြမှုများ၏ Dopamine Gates ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 137: 65-74 ။ [PubMed]
Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့တိုကျရိုကျ cortex အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆ - ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်အိုမင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ Brain Res ။ 1979; 163: 195-205 ။ [PubMed]
Huttenlocher PR စနစ်, က de Courten C. ယောက်ျား၏ striate cortex အတွက် synapses ၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Hum Neurobiol ။ 1987; 6: 1-9 ။ [PubMed]
Insausti R ကို, Cebada-Sanchez က S, လူ့ hippocampal ဖွဲ့စည်းခြင်းမားကို့စပီ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Adv Anat Embryol ဆဲလ် Biol ။ 2010; 206: 1-86 ။ [PubMed]
Jackson က ME, prefrontal cortex dopamine neurotransmission ၏ Moghaddam ခ stimulus-တိကျတဲ့ plasticity ။ J ကို Neurochem ။ 2004; 88: 1327-34 ။ [PubMed]
Jensen J ကို, McIntosh AR, Crawley က AP, Mikulis DJ သမား, Remington, G, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများ၏မျှော်လင့်အတွက် ventral striatum ၏ Kapur အက်စ်တိုက်ရိုက် activation ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 40: 1251-7 ။ [PubMed]
Jezierski, G, Zehle S က, Bock J ကို, Braun K ကို Gruss အမ်အစောပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နာတာရှည် methylphenidate အဆိုပါဆယ်ကျော်သက် medial prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက် Cross-sensitize dopaminergic တုံ့ပြန်မှု။ J ကို Neurochem ။ 2007; 103: 2234-44 ။ [PubMed]
Jolles DD, ဗန် Buchem MA, Crone EA ၏, Rombouts လုပ် SA ။ ကလေးများနှင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက်လုံး-ဦးနှောက် Functional ဆက်သွယ်မှု၏တစ်ဦးကဘက်စုံလေ့လာမှု။ Cereb Cortex ။ 2010 [PubMed]
Juraska JM, Markham ဂျေအေ။ အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စ: အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းကြွက် cortex အတွက်အသံအတိုးအကျယ်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ဆယ်လူလာအခြေခံ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1021: 431-5 ။ [PubMed]
Kalivas PW, Volkow N ကို, စွဲလမ်းအတွက် Seaman ဂျေစီမံထားခြင်းမရှိသောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens အချိုမှုဂီယာအတွက်ရောဂါဗေဒ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 647-50 ။ [PubMed]
Kalsbeek တစ်ဦးက, Voorn P ကို, Buijs RM, ရေကူးကန် CW, Uylings HB ။ ကြွက်များ၏ prefrontal cortex အတွက် dopaminergic innervation ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ J ကို comp Neurol ။ 1988; 269: 58-72 ။ [PubMed]
Katz LC, Shatz CJ ။ Synaptic လှုပ်ရှားမှုနဲ့ cortical ဆားကစ်၏ဆောက်လုပ်ရေး။ သိပ္ပံ။ 1996; 274: 1133-8 ။ [PubMed]
Keshavan က MS, Diwadkar VA သို့, DeBellis M က, Dick, E, Kotwal R ကို, Rosenberg က DR, Sweeney ဂျာ Minshew N ကို, Pettegrew JW ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးအတွက် Corpus callosum ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 2002; 70: 1909-22 ။ [PubMed]
Killgore WD, Oki M က, Yurgelun-Todd DA ။ အကျိုးသက်ရောက်စေမျက်နှာများမှ amygdala တုံ့ပြန်မှုအတွက်လိင်-တိကျတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ Neuroreport ။ 2001; 12: 427-33 ။ [PubMed]
ကင်မ် JH, Juraska JM ။ 15 မှတဆင့် postnatal နေ့က 60 ကနေကြွက် Corpus callosum ၏ splenium အတွက် axon အရေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1997; 102: 77-85 ။ [PubMed]
Kline AE, ချန် MJ, Tso-Olivas Dy, Feeney DM ။ ကြွက်များတွင် ablation-သွေးဆောင် hemiplegia အောက်ပါ Methylphenidate ကုသမှု: မူးယစ်ဆေးလှုပ်ရှားမှုတခုအတွင်းအတွေ့အကြုံကို function ကို၏ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်သက်ရောက်မှုပွောငျးလဲ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1994; 48: 773-9 ။ [PubMed]
Knutson B, Fong သည် GW, Bennett က SM, အဒမ် CM, Hommer ဃ mesial prefrontal cortex ပုဒ် monetarily ကြိုးရလဒ်များတစ်ဒေသ: လျင်မြန်စွာဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Neuroimage ။ 2003; 18: 263-72 ။ [PubMed]
ကော့ချ်, MA, Norris က DG, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှု၏ Hunde-Georgiadis အမ်တစ်ခုကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ Neuroimage ။ 2002; 16: 241-50 ။ [PubMed]
Kuhn CM, Walker က QD, Kaplan Ka လီ ST ။ လိင်, steroids နှင့်လှုံ့ဆော် sensitivity ကို။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2001; 937: 188-201 ။ [PubMed]
Kuppermann bd, Kasamatsu တီ intracortical nnorepinephrine perfusion အကြောင်းမဲ့ပုံမှန်ပေါက်၏အမြင်အာရုံ cortex အတွက်မှန်ဘီလူးအပြန်အလှန် Enhanced ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1984; 302: 91-9 ။ [PubMed]
လန်ဒီ့ကို SC, Vivo အတွက် neurotransmitter plasticity များအတွက် Keefe ဃအထောက်အထား: cholinergic စာနာအာရုံခံ၏ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ dev Biol ။ 1983; 98: 349-72 ။ [PubMed]
Lankford KL, DeMello အပြည်ပြည်သွား, Klein WL ။ D1-type အမျိုးအစား dopamine receptors ယဉ်လှာအာရုံခံအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုကန်တော့ချွန် Motilal တားစီး: neurotransmitters ဖွံ့ဖြိုးဆဲဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် morphogenic တိုးတက်မှုနှုန်းအားပြိုင်မှုအဖြစ်ပြုမူကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1988; 85: 4567-71 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lauder က JM, Krebs အိပ်ချ် serotonin အစောပိုင်း neurogenesis အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု signal ကိုအဖြစ်။ Dev မှ neuroscience ။ 1978; 1: 15-30 ။ [PubMed]
Laviola, G, Adriani W က, Terranova ML, လူ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက် Gerra G. အ Psychobiological အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1999; 23: 993-1010 ။ [PubMed]
Laviola, G, Macri S က, Morley-ဖလက်ချာက S, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင် Adriani ဒဗလျူအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူ: psychobiological ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အစောပိုင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2003; 27: 19-31 ။ [PubMed]
Laviolette SR, Lipski WJ ရေ့ AA ကို။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex ဟာ dopamine D4 အဲဒီ receptor-မှီခို basolateral amygdala input ကိုကတဆင့်ပေါက်ကွဲပြီးနှင့်ကြိမ်နှုန်း codes တွေကိုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု encodes အတွက်အာရုံခံတစ် subpopulation ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 6066-75 ။ [PubMed]
ဥပဒေ AJ, Weickert CS, Webster MJ, Herman MM, Kleinman je, Harrison PJ ။ လူ့ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စဉ်အတွင်း NMDA အဲဒီ receptor NR1, NR2A နှင့် NR2B subunit mRNAs ၏ expression ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 1197-205 ။ [PubMed]
Lebel ကို C, Walker က L ကို, Leemans တစ်ဦးက, Phillips က L ကို, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးမှလူ့ဦးနှောက်၏ Beaulieu C. Microstructural ရငျ့။ Neuroimage ။ 2008; 40: 1044-55 ။ [PubMed]
Lebrand ကို C, Cases ၏အို Wehrle R ကို, Blake RD, Edwards က RH အက, ကြွက် forebrain အတွက် monoamine ပို့ဆောင်ရေး Gaspar P. ယာယီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစကားရပ်။ J ကို comp Neurol ။ 1998; 401: 506-24 ။ [PubMed]
Leslie, CA, Robertson ကမီဂါဝပ်, Cutler AJ, Bennett က JP ပုံမှန်နှင့်မွေးကင်းစကလေးများ 1- hydroxydopamine ကုသကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex, striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် D6 dopamine receptors ၏ဂျူနီယာ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး။ တစ်အရေအတွက် autoradiographic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1991; 62: 109-14 ။ [PubMed]
Leung HC, Skudlarski P ကို, Gatenby JC, Peterson BS, ဂိုး JC ။ အဆိုပါ stroop အရောင်စကားလုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်အလုပ်တခုကို၏ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှု။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 552-60 ။ [PubMed]
Leussis အမတ်, Andersen က SL ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုအထိခိုက်မခံကာလဖြစ်သနည်း လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုမော်ဒယ်ကနေအမူအကျင့်များနှင့် neuroanatomical တွေ့ရှိချက်။ synapses ။ 2008; 62: 22-30 ။ [PubMed]
Levitt P. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲမျောက်ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ရငျ့။ J ကိုကလေး။ 2003; 143: S35-45 ။ [PubMed]
Lewis က DA, Cruz: D, Eggan S က, နိုင်ကြောင်းအက်စ် Postnatal prefrontal inhibitory ဆားကစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် schizophrenia အတွက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ pathophysiology ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1021: 64-76 ။ [PubMed]
Lewis က DA ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: schizophrenia အတွက်အားနည်းချက်အာရုံကြောဆားကစ်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ Neuropsychopharmacology ။ 1997; 16: 385-98 ။ [PubMed]
Li က BM, မျောက်အတွက် GO နှင့် NO-GO ဖျော်ဖြေပွဲနဲ့အမြင်အာရုံခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ဆက်စပ်သော prefrontal cortical အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု Kubota K. Alpha-2 adrenergic မော်ဂျူ။ neuroscience Res ။ 1998; 31: 83-95 ။ [PubMed]
Lichtman JW, စိတ်ကောင်းသော JR ။ Ome ချိုမြိန် ome: ဘာမျိုးရိုးဗီဇဟာ connectome အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်မလား? Curr Opin Neurobiol ။ 2008; 18: 346-53 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lidow က MS, Goldman-Rakic ​​PS, ထိုမျောက်နှောက် cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတွက် neurotransmitter receptors ၏ Rakic ​​P. synchronous overproduction ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1991; 88: 10218-21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Logan GD, Cowan သည့် WB, Davis က ka ။ တစ်မော်ဒယ်နှင့်နည်းလမ်း: ရိုးရှင်းပြီးရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်မှုအချိန်တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့စွမ်းရည်တွင်။ J ကို Exp Psychol Hum အမြင် Perform ။ 1984; 10: 276-91 ။ [PubMed]
လန်ဒန် ED, Ernst M က, Grant က S နဲ့, Bonson K ကို Weinstein အေ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 334-42 ။ [PubMed]
Louiset E၊ Contesse V၊ Groussin L၊ Cartier D၊ Duparc C၊ Barrande G၊ Bertherat J, Vaudry H၊ serotonin7 receptor ၏ Lefebvre H. ဖော်ပြချက်နှင့် adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia တွင် ectopic receptors များနှင့်ပရိုတိန်း kinase A၊ Cushing ရဲ့ရောဂါဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 2006; 91: 4578-86 ။ [PubMed]
Luna B, Padmanabhan A, O'Hearn K. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတစ်ဆင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ fMRI ကအဘယ်အရာပြောသနည်း။ ဦး နှောက် Cogn ။ 2010; 72: 101-13 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Luna B, Sweeney ဂျေအေ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဦးနှောက် function ကိုပေါ်ပေါက်ရေး: တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ FMRI လေ့လာမှုများ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004; 1021: 296-309 ။ [PubMed]
MacLusky NJ, Walters က MJ, Clark က AS, Toran-Allerand CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ ontogeny နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဂယက်: အနှောက် cortex, hippocampus နှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဦးနှောက်ထဲမှာ Aromatase ။ Mol ဆဲလ် neuroscience ။ 1994; 5: 691-698 ။ [PubMed]
Madsen KS, Baare WF, Vestergaard M က, Skimminge တစ်ဦးက, Ejersbo LR, Ramsoy tz, Gerlach ကို C, Akeson P ကို, Paulson OB, Jernigan TL ။ တုန့်ပြန်တားစီးကလေးငယ်များအတွက်အဖြူကိစ္စ microstructure နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Neuropsychologia ။ 48: 854-62 ။ [PubMed]
Marco EM, Macri S က, neurodevelopmental စိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက် Laviola G. အဝေဖန်အသက်အရွယ်ပြတင်းပေါက်: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်သက်သေအထောက်အထား။ Neurotox Res ။ 2011; 19: 286-307 ။ [PubMed]
Markham ဂျာမောရစ် JR, Juraska JM ။ အာရုံခံဆဲလျအရေအတွက်ကြွက် ventral အတွက်လျော့ကျပေမယ့် dorsal မဟုတ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား medial prefrontal cortex ။ neuroscience ။ 2007; 144: 961-8 ။ [PubMed]
Marsh R, Zhu H, Wang Z, Skudlarski P, Peterson BS ။ Tourette ၏ရောဂါလက္ခဏာအတွက် Self- စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ fMRI လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 955-66 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Mazer ကို C, Muneyyirci J ကို, Taheny K ကို Raio N ကို, Borella တစ်ဦးက, Whitaker-Azmitia P. serotonin လျော့ကျ synaptogenesis စဉ်အတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Synaptic သိပ်သည်းဆနှင့်သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုလျော့နည်းကျဆင်းသွားစေပါတယ်: သိမြင်လိုငွေပြမှုနှင့်အတူ neurodevelopmental မမှန်တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံ။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 760: 68-73 ။ [PubMed]
McCutcheon je, Marinelli အမ်ခေတ်ကိစ္စရပ်များ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 997-1014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မက်ဒေါ်နယ် AJ, Pearson JC ။ အဆိုပါ basolateral amygdala ၏ Non-ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက်ဂါဘမြို့သားများနှင့် peptide immunoreactivity ၏အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်။ neuroscience လက်တ။ 1989; 100: 53-8 ။ [PubMed]
Milad MR, Quirk GJ ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်းဘို့ medial prefrontal cortex signal ကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအာရုံခံ။ သဘာဝ။ 2002; 420: 70-4 ။ [PubMed]
Mink JW ။ အဆိုပါ Basal ganglia: ယှဉ်ပြိုင်မော်တာအစီအစဉ်များအာရုံစိုက်ရွေးချယ်ရေးနှင့်တားစီး။ prog Neurobiol ။ 1996; 50: 381-425 ။ [PubMed]
Moll GH, Mehnert ကို C, Wicker M က, Bock N ကို, Rothenberger တစ်ဦးက, Ruther E ကိုစောစောလူငယ်ဘဝကနေကြွက်ဦးနှောက်၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင် presynaptic monoamine ပို့ဆောင်ရေး၏သိပ်သည်းဆအတွက် Huether G. အခေတ်-ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲများကိုနှောင်းပိုင်းတွင်လူကြီးရန်။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 2000; 119: 251-7 ။ [PubMed]
မောရစ် RW, Fung SJ, Rothmond DA, Richards B ကို, ရပ်ကွက်က S, Noble PL, Woodward RA, Weickert CS, Winslow JT ။ prepulse တားစီးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်အပေါ် gonadectomy ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 2010; 35: 896-905 ။ [PubMed]
Nuñez JL, Juraska JM ။ ကြွက် Corpus callosum ၏ splenium ၏အရွယ်အစား: ဟော်မုန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, လိင်အချိုးအစားနှင့်မွေးကင်းစကလေးများ cryoanesthesia ။ dev Psychobiol ။ 1998; 1998; 33: 295-303 ။ [PubMed]
Nuñez JL, Sodhi J ကို, Juraska JM ။ postnatal နေ့က 20 ပြီးနောက်သားအိမ်ဟော်မုန်းကြွက်မူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex အတွက်အာရုံခံဆဲလျအရေအတွက်ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ J ကို Neurobiol ။ 2002; 52: 312-21 ။ [PubMed]
cortical Dopamine ၏ O'Donnell P. ဆယ်ကျော်သက်ရင့်ကျက်။ Neurotox Res ။ ၂၀၁၀
Panksepp ဂျေကြွက်များတွင်ကစား၏ ontogeny ။ dev Psychobiol ။ 1981; 14: 327-332 ။ [PubMed]
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာအဖြူရောင်အမှု pause တီကြီးထွား: myelin သို့မဟုတ် axon? ဦးနှောက် Cogn ။ 2010; 72: 26-35 ။ [PubMed]
pause တီပုံထုတ်ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ရငျ့နှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2005; 9: 60-8 ။ [PubMed]
pause T က, Keshavan M က, Giedd ဖြစ်မှု။ အဘယ်ကြောင့်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008; 9: 947-57 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
pause T က, Tomaiuolo က F, Otaky N ကို, Macdonald: D, Petrides M က, Atlas J ကို, မောရစ် R ကို, အီဗန်, AC ။ လူ့ cingulate နှင့် paracingulate sulci: ပုံစံ, အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ, asymmetry နှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာမြေပုံ။ Cereb Cortex ။ 1996; 6: 207-14 ။ [PubMed]
pause T က, Toro R. ဆအချိုးအစားအားဖြင့်အဖြူရောင်အမှု၌လိင်ကွာခြားချက်များရှင်းလင်းချက်ခံရနိုင်မလား တပ်ဦး Neuroanat ။ 2009; 3: 14 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
pause T က, Zijdenbos တစ်ဦးက, Worsley K သည်, Collins က DL, Blumenthal J ကို, Giedd ဖြစ်မှု, Rapoport JL, အီဗန်, AC ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရငျ့: Vivo လေ့လာမှုမှာ။ သိပ္ပံ။ 1999; 283: 1908-11 ။ [PubMed]
Peper JS, Brouwer RM, Schnack HG, ဗန်ဗာလဘုရား GC, ဗန် Leeuwen က M, ဗန်တွင်း Berg က SM, Delemarre-ဗန်က de Waal HA, Boomsma ပစ, Kahn သည် RS, Hulshoff Pol HE ။ pubertal ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်လိင် steroids နှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2009; 34: 332-42 ။ [PubMed]
Perlman ဟာ WR, Webster MJ, Herman MM, Kleinman je, Weickert CS ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ glucocorticoid အဲဒီ receptor mRNA အဆင့်ဆင့်အတွက်ခေတ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ Neurobiol အို။ 2007; 28: 447-58 ။ [PubMed]
Perrin JS, Herve py, Leonard, G, Perron M က, ပိုက် GB ကို, Pitiot တစ်ဦးက, ပို L ကို, Veillette S က, Pausova Z ကို, ထိုဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ဦးနှောက်ထဲမှာအဖြူရောင်အမှု pause တီကြီးထွား: Testosterone နဲ့အန်ဒရိုဂျင် receptor ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 9519-24 ။ [PubMed]
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအဖြူကိစ္စ၏တိုးတက်မှုအတွက် Perrin JS, Leonard, G, Perron M က, ပိုက် GB ကို, Pitiot တစ်ဦးက, ပို L ကို, Veillette S က, Pausova Z ကို, pause တီလိင်ကွဲပြားမှု။ Neuroimage ။ 2009; 45: 1055-66 ။ [PubMed]
Pezze MA, Bast T က, Conditions ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်များအတွက်ကြွက် medial prefrontal cortex အတွက် dopamine ဂီယာ၏ Feldon ဂျေသိသာထင်ရှားသော။ Cereb Cortex ။ 2003; 13: 371-80 ။ [PubMed]
စျေး JL ။ visceral function ကိုနှင့်စိတ်ဓါတ်များနှင့်ဆက်စပ်သော Prefrontal cortical ကွန်ရက်များ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1999; 877: 383-96 ။ [PubMed]
Pryce CR ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ corticosteroid အဲဒီ receptor မျိုးဗီဇ၏ထုတ်ဖော်ပြောဆို Postnatal ontogeny: inter-မျိုးစိတ်နှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 2008; 57: 596-605 ။ [PubMed]
Purves: D, Lichtman JW ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်း synapses ၏ပပျောက်ရေး။ သိပ္ပံ။ 1980; 210: 153-7 ။ [PubMed]
Putnam အက်ဖ်ဒဗလျူ။ ဆယ်တစ်နှစ်သုတေသန update ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 42: 269-78 ။ [PubMed]
Qiu: D, Tan က LH, ​​Zhou K ကိုမဲခေါင် PL ။ voxel ပညာရှိအတောအတွင်းပျံ့နှံ့, ဒဿမကိန်း anisotropy, radial နှင့် axial ပျံ့၏အကဲဖြတ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အတူဆက်စပ်: ငယ်ရွယ်လူကြီးနှောင်းပိုင်းမှငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေပုံမှန်အဖြူကိစ္စရငျ့၏ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်။ Neuroimage ။ 2008; 41: 223-32 ။ [PubMed]
Rakic ​​P ကို, Bourgeois JP, Eckenhoff MF, Zecevic N ကို, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ အဆိုပါမျောက်နှောက် cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများအတွက် synapses ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ overproduction ။ သိပ္ပံ။ 1986; 232: 232-5 ။ [PubMed]
Rapoport JL, Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, ဟမ်ဘာဂါက S, Jeffries N ကို, ဖာနန်ဒက်ဇ T က, Nicolson R ကို, Bedwell J ကို, Lenane M က, Zijdenbos တစ်ဦးက, pause T က, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း schizophrenia အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအီဗန်အေတိုးတက်ရေးပါတီ cortical ပြောင်းလဲမှု။ တစ်ဦးက longitudinal သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 56: 649-54 ။ [PubMed]
Rebec GV, ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူမှ relapse ၏ Sun ကဒဗလျူအာရုံခံအလွှာ: prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Exp စအိုပြုမူနေ။ 2005; 84: 653-66 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရိဒ် SN, Juraska JM ။ ကြွက် neocortex ၏စုစုပေါင်းအရွယ်အစားလိင်ကွဲပြားမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1992; 321: 442-7 ။ [PubMed]
Rios အိုကြွက်များတွင်တိုကျရိုကျ cortex ဖို့ dorsomedial thalamic နျူကလိယမှအ afferent စီမံကိန်း၏ Villalobos ဂျေ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 2004; 150: 47-50 ။ [PubMed]
Robbins TW ။ ရွှေ့ပြောင်းနှင့်ရပ်တန့်: နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal အလွှာ, neurochemical မော်ဂျူနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2007; 362: 917-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rosenberg က DR, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal နှင့်မော်တာ cortical ရဲ့ dopaminergic innervation ၏ Postnatal ရငျ့: တစ် tyrosine hydroxylase immunohistochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို comp Neurol ။ 1995; 358: 383-400 ။ [PubMed]
Rosenkranz ဂျာ Moore က H ကိုရေ့ AA ကို။ အဆိုပါ prefrontal cortex ယခင်ကအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုမှနှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala အာရုံခံ plasticity နှင့်တုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 11054-64 ။ [PubMed]
ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K ကို Overmeyer S က, တေလာအီး, Brammer M က, Williams က SC, Simmons တစ်ဦးက, အန္ဒြေကို C, Bullmore ET ။ အသက်အရွယ်နှင့်အတူ functional frontalisation: fMRI နှင့်အတူ neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာပုံဖော်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000; 24: 13-9 ။ [PubMed]
ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K ကို Overmeyer S က, တေလာအီး, Brammer M က, Williams က SC, Simmons တစ်ဦးက, Bullmore ET ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI အတူလေ့လာမှု: Higher-အလို့ငှာမော်တာထိန်းချုပ်စဉ်အတွင်းအာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအတွက် Hypofrontality ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 891-6 ။ [PubMed]
Salimi K ကို Glantz LA က, Hamer-RM, ဂျာမန် TT, Gilmore JH, Jarskog LF ။ 1 complexin နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူ့ prefrontal cortex အတွက်2complexin ၏စည်းမျဉ်း။ synapses ။ 2008; 62: 273-82 ။ [PubMed]
Schmithorst VJ, ဟော်လန် SK ကို, Dardzinski BJ ။ ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားအဖြူကိစ္စဗိသုကာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2008; 29: 696-710 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schmithorst VJ, Wilkes M က, Dardzinski BJ, ဟော်လန် SK ကို။ တစ်ဦးပျံ့နှံ့ tensor MRI လေ့လာမှု: သိမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာပုံမှန်ကလေးလူဦးရေအတွက်အဖြူကိစ္စဗိသုကာနှင့်အတူပတျသကျ။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2005; 26: 139-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schoenbaum G. အ, action ကိုအကျိုးသက်ရောက်နှင့်မရေရာဒွိဟနှင့် amygdala-orbitofrontal circuit ကို။ အာရုံစိုက် "ဟုအဆိုပါ amygdala ၏ပေါင်းစပ်တစ်ဖက်သတ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် Orbital prefrontal cortex မျောက်တွေကိုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့အယှက်" J ကို Neurophysiol ။ 2004; 91: 1938-9 ။ [PubMed]
Schulz KP, ဝါသနာရှင် J ကို, တန် CY, Newcorn JH, Buchsbaum က MS, ချောင်လေး, Halperin JM ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းအာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါရောဂါမြီးကောင်ပေါက်အတွက်တုန့်ပြန်တားစီး: ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-ဆက်စပ် FMRI လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 161: 1650-7 ။ [PubMed]
Schwandt ML, ဘား CS, Suomi SJ, Higley JD ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက်စူးရှသောအီသနောအုပ်ချုပ်ရေး (Macaca mulatta) အရက် Clin Exp Res အောက်ပါအပြုအမူအတွက်ခေတ်-မှီခိုမူကွဲ။ 2007; 31: 228-237 ။ [PubMed]
RE, Fuchs RA, Ledford CC ကို, McLaughlin ဂျေမူးယစ်ဆေးစွဲ, relapse, နှင့် amygdala ကိုကြည့်ပါ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003; 985: 294-307 ။ [PubMed]
Seeman P ကို, Bzowej နယူးဟမ်းရှား, ဂွမ် HC, Bergeron ကို C, et al Becker က LE, Reynolds ကမိသားစုဆရာဝန်, Bird ကို ED, Riederer P ကို, Jellinger K ကိုက Watanabe ကို S ။ ကလေးများနှင့်အိုမင်းလူကြီးများအတွက်လူ့ဦးနှောက် dopamine receptors ။ synapses ။ 1987; 1: 399-404 ။ [PubMed]
Shaw P ကို, Eckstrand K သည်, Sharp ကဒဗလျူ, Blumenthal J ကို, Lerch JP, Greenstein: D, Clasen L ကို, အီဗန်တစ်ဦးက, Giedd J ကို, Rapoport JL ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ cortical ရငျ့အတွက်နှောင့်နှေးသဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104: 19649-54 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သိုးထိန်းအ GM က။ ဦးနှောက်၏ Synaptic အဖွဲ့အစည်းက။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1990 ။
Sinclair: D, Webster MJ, Wong က J ကို, Weickert CS ။ လူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် glucocorticoid အဲဒီ receptor အတွက် dynamic မော်လီကျူးများနှင့်ခန္ဓာဗေဒအပြောင်းအလဲများကို။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု [PubMed]
Sisk CL, Foster DL ။ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အာရုံကြောအခြေခံ။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 1040-1047 ။ [PubMed]
Slotkin က TA, Seidler FJ, Ryde အိုင်တီတစ်ဦးကြက်ငှက်တုပ်ကွေးမော်ဒယ်အတွက် acetylcholine နှင့် serotonin လမ်းကြောင်းအပေါ် chlorpyrifos ၏ Yanai ဂျေ Developmental neurotoxic ဆိုးကျိုးများ။ Neurotoxicol Teratol ။ 2008; 30: 433-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Somel M က, ဖရန့်ဇ, ယန် Z ကို, Lorenc တစ်ဦးက, Guo က S, Giger T က, Kelso J ကို, နီကယ် B, Dannemann M က, Bahn S က, Webster MJ, Weickert CS, Lachmann M က, Paabo S ကို, လူ့အတွက် Khaitovich P. မှတ်တမ်း neoteny ဦးနှောက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2009; 106: 5743-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Somerville LH, Casey BJ ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol ။ 2010; 20: 236-41 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, Rex: D, Kornsand: D, Tessner KD, Jernigan TL, Toga AW ။ perisylvian cortical အတွက်ရငျ့: sulcal ပုံစံ asymmetry နှင့် Vivo အတွက်ဒေသခံ cortical မျက်နှာပြင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စဖြန့်ဖြူးပုံဖော်။ Cereb Cortex ။ 2002; 12: 17-26 ။ [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, Tessner KD, Toga AW ။ postadolescent ဦးနှောက်ရငျ့စဉ်အတွင်းပြောင်းပြန်ဆက်ဆံရေး: မြေပုံကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် dorsal တိုကျရိုကျ cortex အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆလျှော့ချရေးဆက်ပြောသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 8819-29 ။ [PubMed]
Sowell ER, Thompson ကလေး, Toga AW ။ အသက်တာ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးလူ့ cortex အတွက်မြေပုံအပြောင်းအလဲများ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 2004; 10: 372-92 ။ [PubMed]
လှံကိုအယ်လ်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience နှင့် Bio-အပြုအမူပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000; 24: 417-463 ။ [PubMed]
Steinberg L. တစ်ဦးကအမူအကျင့်သိပ္ပံပညာရှင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏သိပ္ပံကြည့်ပါတယ်။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010; 72: 160-4 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ Steinberg L. တစ်ဦးက dual-စနစ်များမော်ဒယ်။ dev Psychobiol ။ 2010; 52: 216-24 ။ [PubMed]
Stevens MC, Pearlson GD, Calhoun VD ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလူကြီးမှငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်အာရုံကြောကွန်ရက်များအပြန်အလှန်အတွက်အပြောင်းအလဲများ။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2009; 30: 2356-66 ။ [PubMed]
Stinear CM, Coxon JP, Byblow WD ။ မူလတန်းမော်တာ cortex နဲ့လှုပ်ရှားမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေး: Stop Go ကိုတွေ့ဆုံရှိရာ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2009; 33: 662-73 ။ [PubMed]
Supekar K ကို Musen M ကကလေးများအတွက်အကြီးစားအလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ကွန်ရက် Menon V. ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ PLoS Biol ။ 2009; 7: e1000157 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကလေးငယ်များအတွက် default အနေနဲ့ mode ကိုကွန်ရက်အတွင်း၌အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများ Supekar K ကို Uddin LQ, Prater K ကိုအီဒီအာမင် H ကို, Greicius MD, Menon V. ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ Neuroimage ။ 2010; 52: 290-301 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Swann N ကို, Tandon N ကို, Canolty R ကို, Ellmore TM, McEvoy LK, Dreyer S က, DiSano M က, Aron AR ။ Intracranial EEG အစပျိုးတုံ့ပြန်မှုရပ်တန့်အတွက်ညာဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus နှင့်မူလတန်းမော်တာ cortex များအတွက် time- နှင့်ကြိမ်နှုန်း-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 12675-85 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tarazi FI, Baldessarini RJ ။ dopamine: D (1) ၏နှိုင်းယှဉ် postnatal ဖွံ့ဖြိုးရေး, D ကို (2) နှင့် D ကို (4) ကြွက် forebrain အတွက် receptors ။ int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2000; 18: 29-37 ။ [PubMed]
Tau GZ, Peterson BS ။ ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Neuropsychopharmacology ။ 35: 147-68 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Teicher MH, Andersen က SL, Hostetter JC ။ striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအဘို့, ဂျူနီယာအထောက်အထားသော်လည်းမ accumbens nucleus ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1995; 89: 167-72 ။ [PubMed]
Teicher MH, Dumont NL, Ito က Y ကို, Vaituzis ကို C, Giedd ဖြစ်မှု, Andersen က SL ။ ကလေးဘဝလျစ်လျူရှုလျှော့ Corpus callosum ဧရိယာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 56: 80-5 ။ [PubMed]
Thomason ME, လူမျိုး, E, Burrow B, Whitfield-Gabrieli S ကိုဂလိုဗာ GH, Gabrieli JD ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Spatial နှင့်နှုတ်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ J ကို Cogn neuroscience ။ 2009; 21: 316-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Todd RD ။ အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတဂန္ထဝင် neurotransmitters နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်: dopamine D2 အဲဒီ receptor ဆွ neurite outgrowth ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992; 31: 794-807 ။ [PubMed]
Toran-Allerand CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ အာရုံကြောဖှံ့ဖွိုးတိုးတနေစဉ်အတွင်းအဆိုပါအီစထိုဂျင် / neurotrophin ကွန်နက်ရှင်: အ neurotrophins နှင့်၎င်းတို့၏ receptors နှင့်အတူအီစရိုဂျင် receptor များပူးတွဲ-local ဇီဝသက်ဆိုင်ရာပါသလဲ Dev မှ neuroscience ။ 1996; 18: 36-48 ။ [PubMed]
Tseng KY, Amin F, Lewis BL, O'Donnell P. မွေးကင်းစကလေးငယ်၏ ventral hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသောတိရစ္ဆာန်များ mesocortical activation ကို prefrontal cortical ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 60: 585-90 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tseng KY, O'Donnell P. Dopamine modulation မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာ prefrontal cortical interneurons ပြောင်းလဲခြင်း။ Cereb Cortex ။ 2007; 17: 1235-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ventura R ကို, Morrone ကို C, Puglisi-Allegra အက်စ် Prefrontal / accumbal catecholamines system ကို reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104: 5181-6 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အိုမင်းနေစဉ် Vernadakis အေအာရုံကြော - glial interaction က။ ဗဟိုဘဏ် 1975; 34: 89-95 ။ [PubMed]
Verney ကို C, Grzanna R ကို, ontogeny စဉ်အတွင်းကြွက် cerebellar cortex အတွက် dopamine-beta-hydroxylase ကဲ့သို့ immunoreactive အမျှင်၏ Farkas အီးဖြန့်ဖြူး။ Dev မှ neuroscience ။ 1982; 5: 369-74 ။ [PubMed]
ဗင်းဆင့် SL, Pabreza L ကို, ဂိ FM ရေ။ ကြွက် medial prefrontal cortex ၏ဂါဘမြို့သား-immunoreactive အာရုံခံ၏ Postnatal ရငျ့။ J ကို comp Neurol ။ 1995; 355: 81-92 ။ [PubMed]
Viveros အမတ်, Marco EM, Lopex-Gallardo M က, Garcia က-Segura LM, Wagner EJ ။ ဆယ်ကျော်သက် neurobiology အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအဘို့အမူဘောင်: cannabinoids အပေါ်တစ်ဦးအာရုံ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် neuroscience ဇီဝဗျာ 2010 ။ [PubMed]
Vizuete ML, Venero JL, Traiffort အီး, Vargas ကို C, Machado တစ်ဦးက, 5-HT7 အဲဒီ receptor mRNA ၏ Cano ဂျေဖော်ပြမှုကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း။ neuroscience လက်တ။ 1997; 227: 53-6 ။ [PubMed]
Volkow ND ။ ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအကြောင်းကိုဘာသိရသလဲ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1401-2 ။ [PubMed]
Voorn P ကို, Vanderschuren LJ, Groenewegen HJ, Robbins TW, Pennartz CM ။ အဆိုပါ striatum ရဲ့ dorsal-ventral သွေးခွဲပေါ်မှာလှည့်ဖျားချပြီး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2004; 27: 468-74 ။ [PubMed]
ဝမ် DD, Kriegstein AR ။ cortical တိုက်နယ်နဲ့ Sensorimotor Gates လိုငွေပြမှုအတွက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲအတွက် Bumetanide ရလဒ်များနှင့်အတူအစောပိုင်းဂါဘမြို့သား Depolarization ပိတ်ဆို့ခြင်း။ Cereb Cortex ။ 2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weinberger DR ။ schizophrenia များ၏ pathogenesis များအတွက်ပုံမှန်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဂယက်ရိုက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1987; 44: 660-9 ။ [PubMed]
Whitaker-Azmitia pm တွင်, Azmitia EC ။ သန္ဓေသား serotonergic အာရုံခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Autoregulation: မြင့်သောဆှဖှေဲ့ serotonin receptors ၏အခန်းကဏ္ဍ။ neuroscience လက်တ။ 1986; 67: 307-12 ။ [PubMed]
Wong က DF, Wagner HN, Jr က Dannals RF, et al JM, Frost က JJ, Ravert HT, Wilson က AA ကို, Rosenbaum AE, Gjedde တစ်ဦးက, Douglass KH, Links ။ အသက်ရှင်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ positron tomography ဖြင့်တိုင်းတာ dopamine နှင့် serotonin receptors အပေါ်အသက်ဆိုးကျိုးများ။ သိပ္ပံ 21 ။ 1984; 226 (4681): 1393-6 ။ [PubMed]
ဝူး TU, Pucak ML, Kye CH, မတူ CV ကို, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal cortex အတွက်အခ်ါများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ circuitry ၏ Peripubertal သနျ့စ။ neuroscience ။ 1997; 80: 1149-58 ။ [PubMed]
Yates MA, Juraska JM ။ Pubertal သားအိမ်ဟော်မုန်းထိတွေ့ကြွက် Corpus callosum ၏ splenium အတွက် myelinated axon ၏နံပါတ်လျော့နည်းစေသည်။ Exp Neurol ။ 2008; 209: 284-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ယဉ် X ကို, ခရောဖို့, Griffin JW, Tu P ကို, Lee က VM ကလီကို C, Roder J ကို, Trapp bd ။ Myelin-ဆက်စပ် glycoprotein myelinated axon ၏ caliber modulates တစ် myelin signal ကိုဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 1953-62 ။ [PubMed]
Zavitsanou K ကိုဝမ် H ကို, Dalton VS, ငုယင် V. Cannabinoid အုပ်ချုပ်ရေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များ၏ hippocampus အတွက် 5HT1A အဲဒီ receptor binding နှင့် mRNA စကားရပ်တိုးပွားစေပါသည်။ neuroscience ။ 2010; 169: 315-24 ။ [PubMed]
Zecevic N ကို, Bourgeois JP, မျောက်တွေကို၏မော်တာ cortex အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆအတွက် Rakic ​​P. အပြောင်းအလဲများသန္ဓေသားနှင့် postnatal ဘဝကာလအတွင်း။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1989; 50: 11-32 ။ [PubMed]
Zehr JL, Todd BJ, Schulz KM, ဆက်မက်ကာသီဟာ MM, Sisk CL ။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ pubertal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်း medial amygdala ၏ Dendritic တံစဉ်များကို။ J ကို Neurobiol ။ 2006; 66: 578-90 ။ [PubMed]
Zhang က LI, Poo MM ။ အာရုံကြောဆားကစ်၏လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ နတ် neuroscience ။ 2001;4(ပျော့ပျောင်း): 1207-14 ။ [PubMed]
zhou FC အသင်း, Sari Y ကို, Zhang က JK ။ ကြွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာ serotonin Transporter ပရိုတိန်း၏ expression ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 2000; 119: 33-45 ။ [PubMed]
Zink CF, Pagnoni, G, မာတင်-Skurski ME, Chappelow JC, Bern GS ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှလူ့ striatal တုံ့ပြန်မှု saliency ပေါ်မူတည်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 42: 509-17 ။ [PubMed]
Zisook S က, Rush AJ, ငယျဆုံးသောငါ Wisniewski SR, Trivedi က M, Husain MM, Balasubramani GK, Alpert je အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ Fava အမ် Preadult စတင်ခြင်း vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူစတင်ခြင်း: တစ်ပွားလေ့လာမှု။ Acta Psychiatric Scand ။ 2007; 115: 196-205 ။ [PubMed]
Zuo XN, ကယ်လီကို C, Adelstein JS, Klein DF, Castellanos FX, Milham အမတ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခ်ါဆက်သွယ်မှုကွန်ရက်များ: နှင့် ICA ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်-retest အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် dual-ဆုတ်ယုတ်ချဉ်းကပ်။ Neuroimage ။ 2010; 49: 2163-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]